Do not forget Teoh Beng Hock, I have not, have you for the GE13?
MyKad complaints by Sabah Christians missing from NRD by Bob Teoh
မန္တလေးက ဦးဝီရသူနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ အရေခြုံ ဆူပူအောင်၊လှုံ့ဆော်သူများသီးသန့်နားထောင်ရန်
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မနုဿဗေဒ ပညာရပ် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ပထမဦးဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်သား အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ဦး
သီရိလင်္ကာ – မြန်မာ အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက် နိုင်ငံရေးပေါ်လစီက၊ထပ်တူညီနေတော့ တာပါပဲ
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ စာအုပ်မှ အဓိပ္ပာယ် မဲ့ စွပ်စွဲချက်များ ကို ဖြေရှင်းခြင်း
တိုင်းရင်းသား လူမျိုး(၁၄၄)မျိုးကနေ (၁၃၅)မျိုးဆိုပြီးဦးနေ၀င်းက အာဏာရှင်စနစ်နဲ့လျှော့ချခဲ့တယ်
Malaysia has given the armed Pinoys another 48 hours,2days less than what was requested by Manila, to leave Sabah before all parties involved in the conflict can find their way to the meeting table.
However, they are unlikely to leave. Adding to the standoff is support from some political leaders in the Philippines and news report that 'substantiates' Sulu claim over Sabah. Malacanang's stand is to see them leave and drop the claim untilanew round of negotiation can begin.
And there they are, Manila is split when some parties still pursue suchaclaim, clinging to old and obsolete facts of history. Read this:
..."But it was not until 1962 that the Philippines (under Diosdado Macapagal) tried to flex its muscles, with Indonesia an ally (Indonesia wasn't too keen either on North Borneo being part of the Malaysian Federation, seeing as almost the rest of Borneo is part of Indonesia). And here another good guy must be identified: journalist Napoleon Rama, whose series of articles in the Philippines Free Press titled "North Borneo Belongs to Us" raised an uproar and galvanized public opinion.
Then there was Jovito Salonga, who led the legislature's support for the cause. Macapagal even wrote then US President John F. Kennedy, presumably seeking his help, and began talks with Britain (not much happened). Not so trivia: Macapagal mentioned in his letter that Sabah is only 18 miles from the Philippines and 1,000 miles from Malaya (the Malayan peninsula).
The move to end Malaysia's "hegemony" obviously petered out. But what I cannot understand at this point is why our government seems to be unduly anxious to please Malaysia. When the Philippines was to host the Asean, then Sen. Letty Shahani introducedabill in the Senate proposing to give up our claim to Sabah. (This was stopped in its tracks by Jovito Salonga, who said that any giving up of claims must be conditioned on the protection of the proprietorial rights of the Sultan of Sulu. When the Malaysian king came a-visiting, there was also another move to give up our claim, but Congress apparently refused to cooperate.)
This eagerness to please is particularly puzzling, because Malaysia has been, if anything, rather arrogant insofar as the Philippines is concerned. One remembers that 1,200 Filipino domestic helpers were rounded up inaCatholic church in Malaysia as they were attending Mass. But never mind religious sensibilities. What about its arrogance with regard to the peace talks, trying to tell us what to do or what not to do? Or, the latest, its refusal to turn over Aman Futures' Manuel Amalilio?
Remember when Saddam Hussein launchedamilitary invasion on Kuwait in 1990 for claiming the kingdom as 'once an Iraqi land', the war over Falklands and the former Yugoslavia? It resulted in bloody wars!
Turning back the clock will even permit Malaysia to put its claim on Singapore, the British over Hong Kong or the Aborigines for Australia.
The writer is digging up every second of history so that the Sulu sultanate claim on Sabah prevails. But he forgotafact that part of the reason the Sulu 'invaded' Sabah was the bad treatment they have been getting from Manila.
Raising up the maids issue rounded up inaCatholic church in Sabah was rather improper as the Muslims in Mindanao were also subjected to religious prejudice. So, why must we raise the issue of religion just to findamatch to the Sabah incident?
The world is subscribing to diplomatic channel when it comes to territorial claim. We respected the decisions by the International Court of Justice (ICJ) when Pulau Batu Puteh was awarded to Singapore. The Indonesians too, when Sipadan and Ligitan were given to Malaysia.
Some facts of history remain unsolved but some needacomprehensive mind to weigh it. We cannot depend on history in pushing for our claim. There are major accompanying diplomatic aspects that need to be looked into...
Maaari naming pumili ng kaibigan o foes.Gayunpaman, sa Malaysia-Pilipinas kaugnay, ang pinakamahusay na panatilihin namin kung ano na ang atin ...
Posted: 24 Feb 2013 09:49 AM PST
Posted: 24 Feb 2013 07:59 AM PST
Give him justice!! We really need to find out what happened and who was responsible.
Posted: 24 Feb 2013 06:29 AM PST
Posted: 24 Feb 2013 06:16 AM PST
Files of 162 Bumiputera Christians who complained that they were wrongly classified as Muslims have gone missing from the National Registration Department in Sabah. This was highlighted by the NECF- COSA, the National Evangelical Christian Fellowship Commission of Sabah Affairs, during its recent meeting with Sabah's Assistant Minister of Finance, Datuk Donald Mojuntin, who is also Upko's information chief. The delegation of five pastors was led by its chairman, Rev Datuk Jerry Dusing.
The 162 files were painstakingly compiled by the Sidang Injil Borneo (SIB) Sabah overaperiod of several months from several districts, according to Dusing, who is also SIB president. He said they were handed over by SIB's lawyer, Christina Liew to Haji Abdul Jafer Henry, the then state NRD director in his office two years ago on 24 Sept 2010 and witnessed by two pastors.\_ The 162 Christians claimed they were wrongly classified as Muslims in their MyKads and wanted that rectified.
In their complaints, they also wanted clarification from the department regarding mixed marriages between Muslims and non-Muslims and the religious status of their children. They also wanted to know the procedures of verifying the religious status of MyKad holders who claimed to be non-Muslim but with Islam stated in their MyKad and who should bear the costs of such rectification.
Mojuntin assured the delegation that he would try to findasolution to this problem as soon as possible. The problem arose when MyKad of bumiputra Christians in Sabah and Sarawak having bin and binti in their names were automatically classified by the NRD as Muslims. Matters came toahead when the NRD refused to make any rectification but instead refer the complainants to the Syariah Court foradecision whether they are indeed Muslims. The issue was raised at the cabinet two months ago and it was decided that the NRD resolve the matter quickly. National Registration Department director Ismail Ahmad was quoted as saying the errors were due "technical glitches" that occur due to the data entered into the department's database when they first started the computerisation system.
"I admit that sometimes we make mistakes but this is actually something that can be rectified immediately. All you have to do is come to the office to point out the mistake and we will rectify it for you, the people," he was reported as saying. However, when the SIB enquired about the status of the 162 MyKad complaints of their members, they were told the files have gone missing. Have they? The question is who has taken the files? MYsinchew
Posted: 24 Feb 2013 06:13 AM PST
Asalast resort another Bumiputera Christian has gone to the Syariah High Court to determine her religious status following the National Registration Department's (NRD) alleged refusal to rectify its error of listing her asaMuslim in her MyKad. This follows another three similar cases also before the Syariah High Court in Sabah.
Juinah binti Paulus @ Zulkifli,aMurut woman from Tenom in the western interior of Sabah, maintains she isaChristian from birth. But the Majlis Ugama Islam Negeri Sabah (Muis) shot back and insisted that her mother had embraced Islam 22 years ago in nearby Keningau, situated in Sabah's oldest interior division in the beautiful valley between the Crocker and Trus Madi ranges. Like many Bumiputera Christians in Sabah and Sarawak with bin or binti in their names, they are automatically classified as Muslims in their MyKad. The NRD has consistently refused to rectify this and would only do so if the Syariah Court ruled that they are indeed not Muslims. This is despitearecent Cabinet directive to resolve such disputes quickly. A main hurdle faced by such complainants is that they are not allowed to be represented by non-Muslims lawyers. This has come to be known as MyKad 'Islamisation' in East Malaysia.
She said she has suffered greatly due to the mistake made by the NRD in classifying her asaMuslim and wants an order from the court to say that she isaChristian and notaMuslim to enable her to go back to the NRD to getanew MyKad. She also providedastatement from her ketua kampong of her village confirming that she isaChristian. Replying on behalf of Muis, Rais bin Japar, from the prosecution division of Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, denied all claims made by Juinah in her affidavit. He said according to records, Juinah's mother had embraced Islam in 1980 in Keningau and is known by her Muslim name as Norhayati binti Ampasoh. But this did not say how this made JuinahaMuslim. The rest of her four siblings are not tagged as Muslims in their MyKad.
Meeting With Thura Shwe Mann, House Speaker, in Myitkyina92 13
မန္တလေးက ဦးဝီရသူနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ အရေခြုံ ဆူပူအောင်၊လှုံ့ဆော်သူများသီးသန့်နားထောင်ရန်။
အောက်ပိုင်းကတက်လာတဲ့ တပ်မတော်သားများ ရဲ့ကျူးလွန်မူ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ကချင်ရွာတွေကို မီးရှို့တယ်၊ပေါ်တာဆွဲတယ်၊ ကချင်အမျိုးသမီးများကိုအုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နေရာဒေသအတော်များများမှာ အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့် တော်တော်ဖြစ်တယ်။ ဒီကချင်ဒေသမှာတင်မကပါဘူး မြန်မာ့ တပ်မတော်သားများ အနေနဲ့ ကချင်နေရာမှာဖြစ်တယ်၊ ရှမ်းမှာဖြစ်တယ်၊ ကရင်မှာ ဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေနဲလ့က်နက်ကိုင်တွေ အုပ်စုတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ သို့သော် လည်းပဲ ဘယ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တဲ့အုပ်စုကမှ ဗမာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဝိုင်းပြီးမုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ တစခါမှမကြားဘူးပါ။
Posted: 24 Feb 2013 02:08 AM PST
TQ LYC Dr. Tint Tint Kyi and my classmate Dr Tin Min. I just wish to publish this record although I missed or failed to be elected in this year of 1967. I was selected in 66 & 68. At least we all could taste the experience ofaLYC camps. Dr Tin Min, Dr Than Win and I were together in 66 & 68. Dr Tin Min continuously got LYC in 67 and 69. In 1st. MBBS Jr he was selected and I failed. But from 1st. MBBS Sr, 2nd MB Jr and Sr I was selected. TQ friend for the good record keeping.
၁၉၆၇ ခုနှစ် လူရည်ချွန် စခန်း ရက်စွဲ မှတ်တမ်းများ
-၃-၆၇ -ငပလီ ရွှေဝါချိုင်စခန်းသို့ ပြည်တော်အေးသင်္ဘောဖြင့် စတင်ထွက်ခွာ
-၃-၆၇ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဖာနှင့်သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်မှ လက်ထောက်ကထီက နော်ကယ်လစ်တန်မင်းက မဇင်းရွာ ၌ ရုက္ခဗေဒပညာရပ်များကိုစာတွေ့ လက်တွေ့ 
၃၀-၃-၆၇ ငပလီစခန်း ၌ လူရည်ချွန်ကလေးများအား လူငယ်ရေးရာ တံဆိပ်ပေးအပ်။
၂-၄-၆၇ ငပလီ၊ ငှက်ပျောချောင်း ဆည်ရေစစ်ကန် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း ၌ပါဝင်
-၄-၆၇ သဲသောင်ပြင်တွင် ဆတ်သားများကို လူရည်ချွန်ကလေးများ ကိုယ်တိုင်ကင်၊
ကိုယ်တိုင်စား အစီအစဉ်ဖြင့် တပျော်တပါး ဆင်နွှဲ။
၅-၄-၆၇ ငပလီ စခန်းသိမ်းပွဲ ကျင်းပ။
၇-၄-၆၇ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအားလက်ဆောင်ပေးရန်
ရည်စူး ယူဆောင်လာသော ပင်လယ်ကျောက်ခက်ကြီးကို ငပလီလူရည်ချွန်များ
ပြည်တော်အေး သင်္ဘောပေါ်မှ သယ်ချလာ။
၁၉၆၇ ခုနှစ်တန်းနှင့် ရှစ်တန်းလူရည်ချွန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ငပလီ
စခန်း(၁)မှ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ပြည်တော်အေး သင်္ဘောဖြင့် ညနေ(၆)နာရီ
သူများက ဆိပ်ကမ်းမှ စောင့်ကြို အောင်သပြေပန်းများကမ်းလှမ်း။
(၁) မောင်ထင်ကျော်- တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အထက(၁) မြိတ်
(၂) မောင်စိုးဌေး – တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း၊ ဘားအံ
လူရည်ချွန်စခန်းဖွင့်ပွဲ ၌လူရည်ချွန် တံဆိပ်များနှင့် ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံ၏ လူရည်ချွန်ဂုဏ်ပြုလွှာများကို ပညာ ညွှန်ကြားရေးဝန် ဦးဘိုးသုန်က လူရည်ချွန်ကျောင်း
လေးထပ်ကွမ်းလူရည်ချွန်များဖြစ်ကြသော ဘားအံမှ ပောင်စိုးဌေး နှင့်မြိတ်မှ မောင်ထင်
ပေါ်တို့ အား နိုင်ငံခြားရေး ဌာနတာဝန်ခံ ဦးသီဟန်၊ ပြန်ကြားရေးဌာန အတွင်းဝန်၊ ပညာရေးဌာနအတွင်းဝန်၊နှင့် အလုပ်သမားဌာန အတွင်းဝန်တို့ ကတွေ့ ဆုံနှုတ်ဆက်ချီး
-၄-၆၇ ပြန်ကြားရေးဌာန နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဌာန တာဝန်ခံ ၏ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ
၁၀-၄-၆၇ လူရည်ချွန်များရွှေတိဂုံစေတီ ဖူးမျှော်
ဘုရားလမ်း အမျိုးသားပြတိုက်၊ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ် နှင့် မြေနီကုန်း ကျန်းမာရေး
၁၁-၄-၆၇ ရန်ကုန်ပြည်လမ်း အသံလွှင့်ရုံ မြက်ခင်းပြင် တွင် ရန်ကုန်စခန်းရှိလူရည်ချွန်
များကို ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီးလှဟန် က ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်း။
ဗိုလ်မှူးကြီးလှဟန်၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦး
နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဘုန်း တို့ က လူရည်ချွန်
၁၂-၄-၆၇ နံနက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ နှင်းသဘင် ခန်းမ
အကြောင်း နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှ ကထိက တဦးက ဟောပြော။
ညပိုင်း (၇ နာရီ ခွဲ) ပြည်လမ်း ဆေးတက္ကသိုလ် အမှတ်(၁)
စခန်းသိမ်းပဒေသာကပွဲ ကျင်းပ။ ပြည်သူ့ ရင်နှစ်ချစ်ကြည်ရာမြေ အက
နဝမတန်းနှင့် အခြေခံပညာရေး အထက်တန်း၊ သချာင်္လူရည်ချွန် ၊ စက်မှု နှင့်
စိုက်ပျိုးရေး ကျောင်းသားများ။- အင်းလေးခေါင်တိုင်စခန်းသို့ ထွက်ခွာ။
စခန်းဖွင့်ပွဲ တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးထွန်းအေး က လူရည်ချွန်များ အား
၂၃-၄-၆၇ လူရည်ချွန်များ လွိုင်ကော်သို့ ဆိုက်ရောက်။
၂၃ -၄-၆၇ လွိုင်ကော်နှင့် (၁၀)မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော ဒီမော့ဆို မြို့ နယ်ပြည်သူ့ 
ဆေးရုံသစ်ကြီးအား သန့် ရှင်းရေးလုပ်အားပေး။
၂၃-၄-၆၇ လောပီတ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာ။
၂၅-၄-၆၇ လူရည်ချွန်များသည် တပ်မတော်သားများ၊ နယ်ခံကျောင်းသားကျောင်းသူ
များ နှင့်အတူ ရပ်စောက်မြို့ သူမြို့ သားများ သုံးရေအဖြစ်သုံးစွဲနေရသော
မြို့ ပါတ် အင်းခေါင်းရေထွက်ချောင်း သန့် ရှင်းရေးအတွက် လုပ်အားပေး။
၂၈-၄-၆၇ စခန်းသိမ်းပွဲ လူရည်ချွန်မောင်မယ်များ က ရှမ်းရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အကဖြင့်
၃၀-၄-၆၇ အင်းလေးခေါင်တိုင်စခန်းမှ လူရည်ချွန်များ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးသို့့ပြန်လည်
၁၉၆၇ ခုနှစ် ငပလီအဖွဲ့ (၂) တက္ကသိုလ် နှင့်ကောလိပ်များမှ)
လူရည်ချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စစ်ရေယာဉ် မေယုပေါ်မှ နှုတ်ဆက်။
ငပလီ ရွှေဝါချိုင် လူရည်ချွန်စခန်းဖွင့်ပွဲ တွင် ပညာရေး ဌာန အတွင်းဝန်
ဒေါက်တာညီညီ မိန့် ခွန်းပြော
သင်္ကြန် အတက်နေ့ရခိုင်ရိုးရာ အတာသဘင်ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲ။
-၄-၆၇ လူရည်ချွန်များအား ၊ နည်းပြချုပ်ဦးချစ်လှိုင် က ဘဝ နှင့် အသိတရား
အကြောင်း ဟောပြောပို့ ချ။
၁၉-၄-၆၇ ရန်ကုန် ဝိဖ္ဖာနှင့်သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် ရုက္ခသိပ္ပံ ပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ
ကိုကိုလေး သည် လူရည်ချွန်များကို သတ္တသိပ္ပံ ပညာရပ်များ နှင့် ရုက္ခသိပ္ပံပညာ
ရပ်များကို လက်တွေ့ ပြသ ရှင်းလင်း။
၂၁-၄-၆၇ ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်တွင် ကြံခိုင်ပျော်ရွှင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်။
၂၂-၄-၆၇ ငပလီ စခန်းမှူး ဥိးလှရွှေ က လူရည်ချွန်များကို ရှေ့ ဆောင်လူငယ် တံဆိပ်
များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်။
၂၃-၄-၆၇ တပ်မတော်သားများနှင့်လက်တွဲကာ စခန်းအနီးရှိ ငှက်ပျောချောင်းရေစစ်
ကန် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း များတွင်လုပ်အားပေး။
-၄-၆၇ အမှတ်တရ လူရည်ချွန်အုန်းပင်စိုက်
၂၃-၄-၆၇ ညနေ ငပလီကမ်းခြေ တွင် ပင်လယ် ရေမှော်ပင်များကိုရှာဖွေ ကောက်ယူ။
၂၅-၄-၆၇ ည အမှတ်(၅၅) ခြေလျှင်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူးပီကျော်ဟန် နှင့်ဇနီး တို့ က
ညစာစားပွဲ ဖြင့် တည်ခင်းဓည့်ခံ။
၂၇-၄-၆၇ စခန်းသိမ်းပွဲ ကျင်းပ။
၂၈-၄-၆၇ ငပလီ မှ လူရည်ချွန်များ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်သို ပြန်လည်ဆိုက်ရောက်။ ထိုနေ့ 
တွင်ပင် အချို့ မီးရထားဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ခွာ။
( စီမံကိန်းစာအုပ်ကို အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သတင်းစာ ပါ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများအရ
ရက်စွဲ မှတ်တမ်းပြုစုကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်က အသုံးအနှုန်းများအတိုင်း ကူးရေး
ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအချိန် မှ လူရည်ချွန်များအတွက် ပြန်လည်ပြောပြနိုင်စေရန် ရည်ရွှယ်
ပါသည်။) (မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများကို ငယ်စဉ်ကပင်စုဆောင်းသိမ်းဆည်းခဲ့သူ ဒေါက်တာဦး
တင်မင်း ၄ထပ်ကွမ်း ဗန်းမော်လူရည်ချွန်ကိုကျေး ဇူးတင်ပါသည်။)
Posted: 24 Feb 2013 03:47 AM PST
"Saya dengar sendiri seluruh ucapannya yang tak menghina rakyat tapi hina motif penggunaan wang untuk memperbodohkan rakyat. Ada dua perbezaan.
"Nik Aziz dituduh hina rakyat yang tidak langsung tertera dalam ucapan beliau. Ini membuktikan betapa bobrok, rosaknya media Umno untuk cuba mengaibkan pemimpin yang menampilkan akhlak baik.
"Bila saya baca sekaligus, sukar mempercayai. Bila saya rujuk kenyataan lengkap. Ternyata sekali lagi fitnah yang direkayasa mahu dijadikan bukti sahih," katanya.
"Bagi rakyat dengar, TV3 beri ruang kepada Nik Aziz yang pada istilah Umno, mustahil berlaku. Jadi, kita doakan supaya perubahan (politik) berlaku ," katanya.
Posted: 24 Feb 2013 01:21 AM PST
ကြယ်ကြီးတစ်ပွင့် ထာဝရ တိမ်မဖုံးစေချင် (သို့) ဒေါ်ခင်ခင်ဦး by Ye Yint Thitsar in M-Media
မြန်မာပြည်ဖွား၊ မြန်မာဆန်စား၊ မြန်မာရေသောက်၊ မြန်မာ့ဓလေ့တွေ ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အပေါ် သစ္စာထားသူတွေ ကို မြန်မာပြည်သားတွေ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတွေ ကွဲပြားတာတွေရှိပေမဲ့၊ နိုင်ငံ့အရေး၊ ပြည့်အရာ တွေမှာတော့
ဘာသာပေါင်းစုံ က မြန်မာပြည်သားတွေ ဟာ အတူတကွလက်တွဲပြီး အမြဲတမ်းရှေ့တန်း
ကနေ ရပ်တည်ခဲ့ကြတာ သမိုင်း အထင်အရှားတွေရှိပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ ဟာ နိုင်ငံ့အရေး၊ ပြည့်အရာတွေ
ပေါ်ပေါက်လာရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားအများစု နဲ့ အတူ ပခုံးချင်း
ယှဉ်သင့်ယှဉ်၊ ကျောချင်းကပ်သင့်ကပ်၊ ရင်မြေနှလုံးသားကို ကတုတ်လုပ်သင့်လုပ် တိုက်ပွဲ
ဝင်ခဲ့ရာမှာ နောက်တန်းက ကျန်နေရစ်တာမျိုး သမိုင်းမရှိပါ။ တိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့ ဆိုရာမှာ
လက်နက်ကိုင်၊ အသက်ယူ၊ အသက်ပေး တာမျိုးကိုသာ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပညာကို
အသုံးပြုပြီးဖြစ်စေ၊ ဓနဥစ္စာကို အသုံးပြုပြီးဖြစ်စေ၊ ဂုဏ်ဒြပ် ဩဇာ ကို အသုံးပြုပြီးဖြစ်စေ၊
တိုင်းပြည် အတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ရင် အဲဒီလို ကြိုးပမ်းခြင်း ကို တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း၊ အဲဒီလိုကြိုးပမ်း
သူတွေကို သူရဲကောင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ တိုက်ပွဲဝင်မြန်မာ
မွတ်စ်လင်မ် သူရဲကောင်း တွေ (အစ္စလာမ် ဘာသာကိုကိုးကွယ်သော မြန်မာပြည်သားများ)
အမြောက်အများရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုတိုင်လည်း ရှိနေဆဲပါ။
သို့သော် ယနေ့မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်သူရဲကောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရာမှာ အမှတ်တရ
မရှိခဲ့ဘဲ၊ မတော်တဆ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ထုံမွှမ်းရရင် တိမ်ဖုံးနေခဲ့ရှာတဲ့
ကြယ်ကြီးတစ်ပွင့် ဟာ ယနေ့တိုင် ထွန်းလင်းလျှက်ရှိနေတဲ့ အကြောင်း မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်
တို့ကို သိစေချင်ပါတယ်။ အဲဒီ ကြယ်ကြီးတစ်ပွင့် ကို ထာဝရ တိမ်မဖုံးစေချင်ပါ။ အဲဒီ
ကြယ်ကြီးတစ်ပွင့်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မနုဿဗေဒ ပညာရပ် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို
ပထမဦးဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်သား အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ဦး
ဆရာမကြီး အား အဖ ဦးဘရှင်၊ အမိ ဒေါ်တင်တင် တို့မှ ၁၅.၁.၁၉၁၅ တွင် ပခုက္ကူမြို့
၌ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၆-၃၇ တွင် ပခုက္ကူအထက်တန်းကျောင်း ၌ ဆရာမ အဖြစ်
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၃၇ မှ ၁၉၄၁ အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တွင် ပညာ
သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကြောင့် ၁၉၄၁၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်
တက္ကသိုလ် သင်တန်းများအား ရပ်နားခဲ့ရပြီး၊ ၁၉၄၆ ကျောင်းပြန်ဖွင့်သည့်အခါ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (B.A) ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၆ မှ ၁၉၅၀ ခုနှစ်အထိ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဌာနတွင် ဆရာမ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရင်း၊
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (M.A) အား ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ တွင် အမေရိကန်
နိုင်ငံ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ် တို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၅၃ တွင် မနုဿဗေဒ
ဆိုင်ရာ(Anthropology) မဟာဘွဲ့ ရရှိခဲ့၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တွင် မနုဿဗေဒ
၁၉၅၁ နှင့် ၁၉၇၀၊ ၁၉၇၂ တို့ တွင် ရခိုင်ဒေသ သို့ ကွင်းဆင်းသုတေသန ပြုခဲ့ပြီး၊
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ ၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများအကြောင်း စာတမ်းပြုစုခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၅-၆၆ တွင် တောင်ကြီးခရိုင်သို့သွားရောက်၍ ပအို့၊ ဓနု၊ တောင်ရိုး၊ အင်းသား၊
ပလောင် တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့များကို သုတေသနပြုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၇-၆၈
တွင် လွိုင်လင်ခရိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ရှမ်း၊ပအို့၊ရင်းနက်၊ ရင်းချားတိုင်းရင်း
သားတို့ ၏ ရိုးရာဓလေ့ယဉ်ကျေးမှု များကို သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ၁၉၇၂-၇၃ တွင်
၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် သက်ပြည့်ပင်စင် နှစ်ပြည့်ခဲ့သော်လည်း တာဝန်လွှဲပြောင်း ယူမည့်
ပညာရှင် မရှိသေးသဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မနုဿဗေဒဌာနတွင် ဌာနမှူးအဖြစ်
ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် အလုပ်တာဝန်များ မှ အနား
ယူခဲ့သည်။ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်ခင်ဦးသည်ယခု အသက် (၉၈) နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး၊
အသက်အရွယ်ကြီးသူများ ခံစားရသည့်သဘာဝ များမှလွဲ၍အခြားမည်သည့် ရောဂါမျှ
မရှိဘဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တွင် မြေးဖြစ်သူ ဦးရဲလွင်ထူး၊
မြစ်မလေး တို့နှင့် အတူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်
သမိုင်းဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာန၊ မနုဿဗေဒ ဌာနတို့ မှ ဆရာကြီး၊
ဆရာမကြီး၊ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ယနေ့တိုင်အခွင့်အခါသင့်သည့် အခါ ဆရာမကြီး
အား လာရောက်ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံ လေ့ရှိကြောင်းသိခဲ့ရသည်။
မှတ်ချက်။ ကျွန်ုပ် သွားရောက်ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံ စဉ် ဆရာမကြီးသည် လွန်စွာဝမ်းမြောက်
ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ သူ့အား ဤသို့ အရေးတယူလာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း အတွက် ပီတိ
ဖြစ်မိကြောင်း၊ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များ အနေဖြင့် မိမိတို့ ၏ ဘာသာသာသနာအလျောက်
အဆုံးအမများ ကို လိုက်နာစေလိုကြောင်း၊ ခေတ်ပညာတတ်များဖြစ်ကြပြီး တိုင်းပြည်အကျိုး
သယ်ပိုး နိုင်ကြပါစေကြောင်း စသဖြင့် ဆုံးမ ဩဝါဒ ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆရာမကြီးသည် ယခု
တိုင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကို ပီသမှန်ကန်စွာ ပြောဆိုနိုင်ပြီး၊ သွေးကစကားပြော၍
ထင့်၊ ကျွန်ုပ် တို့ ဇနီးမောင်နှံ ဆရာမကြီးအိမ်ရောက်သည့် အခါ ဆရာမကြီး ၏ မြစ်မ
လေးမှာ (အသက် ၅ နှစ်ခန့်ရှိမည်ထင်ပါသည်) ကျွန်ုပ် အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
ဖြင့် နှုတ်ဆက်ပြီး ကျွန်ုပ်နှင့် အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆရာမကြီးအား
ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် ကျွန်ုပ် မှ ခွင့်တောင်းပြီး ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ချိန်ရွယ်နေစဉ် "သားရေ
ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခါနီး ပြောဦးနော်" ဟု ဖြေးညှင်းချိုသာစွာ ပြောဆိုခဲ့သည့် ဆရာမကြီး ၏
စကားသံအား ကျွန်ုပ်မည်သည့်အခါမျှ မေ့ပျောက်မည် မဟုတ်ပေ။
Posted: 24 Feb 2013 01:11 AM PST
ဟိန္ဒူဆိုတာ လူမျိုးမဟုတ်သလို၊ မွတ်စ်လင်မ်ဆိုတာလည်း လူမျိုးမဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယ တိုက်ငယ်မှာနေထိုင်သူ အားလုံးကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဟိန္ဒူ လို့ ခေါ် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုအောက်တစ်နေရာမှာ ရေးပြပါဦးမယ်။ မွတ်စ်လင်မ်ဆိုတဲ့ အာရဗီဝေါဟာရ နဲ့ အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ အာရဗီဝေါဟာရနှစ်ခုစလုံး ဟာအာရဗီဝေါဟာရ အရင်းအမြစ် "စလမ" က နေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ "စလမ" ဆိုတာ "ငြိမ်းချမ်းခြင်း" "နာခံခြင်း" လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွတ်စ်လင်မ် ဆိုတာ အမိန့်နာခံသူ ၊ ငြိမ်းချမ်းသူ လို့ အနက်ရပါတယ်။ အစ္စလာမ် ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူတိုင်းကို မွတ်စ်လင်မ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ တရုတ် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျပန်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗမာဖြစ်ဖြစ်၊ ကုလားဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျူးဖြစ်ဖြစ်၊ လူဖြူဖြစ်ဖြစ်၊ လူမည်း ဖြစ်ဖြစ် အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ရင် မွတ်စ်လင်မ်ပါပဲ။ အဲဒီ concept သညာကို နားမလည်သရွေ့သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ နေနေသာသာ တစ်ပါးသူရေးထားတဲ့ သမိုင်းကို နားလည်ဖို့တောင်မလွယ် ပါဘူး။မွတ်စ်လင်မ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကွဲပြားရှင်းလင်းစွာ နားလည်သွား အောင် ကမ္ဘာကျော် ကျမ်းကြီးတွေရဲ့ အဖွင့်တွေ ကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရ အောင်ခင်ဗျာ-
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, seventh edition, Oxford, Oxford University Press, 2006.
"Muslim/'muzlim; 'maz-;-ləm / nounaperson whose religion is Islam" Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary, Springfield, U.S.A, Merriam-Webster, Incorporated, 2008.
"Muslim/'mazləm/ noun, pl Muslims [count] :aperson whose religion is Islam :afollower of Islam"
"မွတ်စလင် / mu hsalin / n Muslim; one who professes Islam. [Arab muslim]"
စာအုပ်စာမျက်နှာ (၈၄)မှာ ရေးထားတာက-"မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ဝင်ရောက် လာသော အစ္စလမ်ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင်များသည် အာရပ်လူမျိုးများမဟုတ်ပါ။ အစ္စလမ်ဘာသာအောက် သို့ သွတ်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးခေါတော ကုလားများဖြစ်သည်" မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဘယ် မွတ်စ်လင်မ်တွေက ဘယ်တုန်းက စဝင်ရောက်လာခဲ့ သလဲဆိုတာကို ပညာရှင်တွေ ပြုစုထားတဲ့ ကျမ်းကြီးတွေ က အထောက်အထားတွေ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
(ခ) အနော်ရထာမင်းပုဂံမှာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် မတည်ခင်၊ အေဒီ (၉) ရာစုကတည်းက မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ၊ တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ရခိုင် ကို ရောက်ရှိခဲ့တယ် လို့ Moshe Yegar ရဲ့ "The Muslims of Burma" A study ofaminority Group စာမျက်နှာ (၂) မှာရေးထား ပါတယ်။
(ဂ) မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုကုန်သည်တွေ၊ စစ်အရာရှိတွေ၊ စစ်သုံ့ပန်းတွေ၊ ကျွန်တွေ အဖြစ် ရောက်ရှိလာ တာတွေဖြစ်ပြီး၊ ကနဦးရောက်လာ တဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ တော်ဝင် အကြံပေး အရာရှိတွေ၊ တော်ဝင် အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိတွေ၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွေ၊ မြို့တော်ဝန်တွေ၊ ရိုးရာဆေးပညာရှင် တွေ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း Moshe Yegar ရဲ့ "The Muslims of Burma" A study ofaminority Group" မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(ဃ) အေဒီ (၈၆၀) ခန့်မှာ ပါရှန်းမွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ တရုတ်ပြည်ယူနန် နယ်စပ် ကတစ်ဆင့်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကို ရောက်ခဲ့တယ်လို့ Sayyid Qudratullah Fatimi က "The role of China in the spread of Islam in South East Asia" စာမျက်နှာ (၉) မှာရေးသားထားပါတယ်။
(ဇ) ဆရာကြီး G.H Luce နဲ့ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်တို့ English ဘာသာကို ပြန်ထားတဲ့ မှန်နန်းရာဇဝင် (The Glass Palace Chronicle of the Kings of Myanmar) စာမျက်နှာ (၇၅) ၊ "Of the mighty men of valour, the Kala brothers" (စွမ်းပကားသတ္တိကြီးမားသော ကုလားညီနောင်များ) ခေါင်းစဉ် ငယ် အောက်မှာ- "ကုလားညီနောင်နှစ်ယောက်ဟာ သထုံအနီး သင်္ဘောပျက်ရာမှ ပျဉ်ပြားချပ်အား မှီတွယ်၍ သထုံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။"
(ဈ) မြန်မာသက္ကရာဇ် ၅၉၅ (အေဒီ ၁၂၃၅) မတိုင်ခင် မှာ ပုသိမ်မြို့ကို ကုလားပသီမင်းတွေအုပ်စိုးခဲ့ပြီး ၅၉၅ မှာတော့ ဂုဏ္ဏသာရ နဲ့ ဂုဏ္ဏသာရီ အမည် ရှိကြတဲ့ မွန်ညီနောင်နှစ်ပါးက ပသီမင်းကိုလုပ်ကြံပြီး အစဉ်အဆက် စိုးစံခဲ့ကြ တယ် လို့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၆) ၊ စာမျက်နှာ (၃၅၀)၊ "ပုသိမ်" entry မှာ ပါရှိပါတယ်။
(ဎ) အေဒီ (၁၆၁၃) မှာ သန်လျှင်မြို့စား ငဇင်ကာ ငှားရမ်းခဲ့တဲ့ကုလား ပသီ (၂၀၀၀) ကျော်ကို အနောက်ဘက်လွန်မင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီ ကုလားပသီတွေကိုရွှေဘိုမြို့မြောက်ဖက်နဲ့ အင်းဝမြို့မြောက်ဖက်တို့မှာ အစု ခွဲပြီးနေရာ ချထားခဲ့တယ်လို့ ဆရာမောင်ကျော်ရှင်းရဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်စာပေ ဗိမာန်စာမူဆုရ "မြေတူမြို့" စာအုပ် စာမျက်နှာ ၆၀-၆၁ တို့မှာ ရေးသား ထားပါတယ်။
(ဏ)ညောင်ရမ်းခေတ်တွင်မြေတူမြို့၌ လုပ်မြေနေမြေပေး၍ချထားခြင်း ခံရသော ပသီကုလားများသည်လည်း မြန်မာ၊ ရှမ်း၊ကတူး စသောတိုင်းရင်းသား များနှင့် အတူလက်တွဲလျက် ပြည်တွင်းပြည်ပရန်သူ ဟူသမျှကိုသစ္စာ ရှိရှိတာဝန် သိသိ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ကြပါသည်။ မြေတူမြို့မှ ပသီကုလားများသည်လည်း အမြောက်တပ်များတွင် ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၊ မြေတူပသီများသည် မြင်း တပ်၊ သေနပ်ကိုင်တပ်စသောတပ်များတွင်လည်း သစ္စာရှိရှိတာဝန်သိသိ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ (ဆရာမောင်ကျော်ရှင်း၏ ၁၉၉၇ ခုနှစ် စာပေဗိမာန် စာမူဆုရ "မြေတူမြို့" စာအုပ် စာမျက်နှာ ၁၃၃)
အထက်ပါအကိုးအကားတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တွေ တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခြင်းမပြုခင်ကတည်းက တိုင်းတစ်ပါးက ကူးပြောင်းရောက်ရှိ လာ တဲ့ အာရပ်၊ ပါရှန်း၊ အိန္ဒိယအနွယ် မွတ်စ်လင်မ်တွေနဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား မွတ်စ်လင်မ်တွေ ဟာရှိခဲ့ကြောင်းပြဆိုတဲ့ ခိုင်မာသော အထောက်အထားတွေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း တစ်လျှောက် ရခိုင်မင်းဆက်တွေ လက်ထက် အပြင်ပုဂံ မင်းဆက်၊ တောင်ငူမင်းဆက်၊ ညောင်ရမ်းမင်းဆက်၊ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ခေတ်တိုင်းမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေရှိခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေဟာ ရာဇဝင် အဖုံဖုံ၊ ကျမ်းအသွယ်သွယ်၊ စာအုပ်အမျိုးမျိုးမှာ ပါရှိနေပါတယ်။ သမိုင်းကိုအစွဲမပါဘဲ တကယ်သိချင်တယ်၊ တကယ်မ "အ" ချင်ဘူးဆိုရင် ကြိုးစားလေ့လာ ကြပါလို့ ရိုသေစွာ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မွတ်စ်လင်မ်သမိုင်းသီးသန့် သိချင် ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်မြန်မာ့သမိုင်း ပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးကြီးဘရှင် (ဗိုလ်မှူးဘရှင်) ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ Coming of Islam to Burma down to 1700 A.D ကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်-၈ [မဂိုမင်းဆက် သမိုင်းအမှန် - အိမ်တွင်းပုန်းတာ အစ္စလာမ်ကြောင့်လား]
သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်-၉ ["ဒါကာ" နှင့် "ဓားကာ" အလွဲ- လူတို့သဘာဝ]
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ၊ ၂၀၁၃
www.mmtimes.com မှ Anti-Muslim monks: Sri Lanka redux? ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၃ ၊ ၂၀၁၂ တွင်တင်ပြခဲ့သော Alex Bookbinder ၏ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်သလို မြန်မာပြန်ပါသည်။
သီရိလင်္ကာမှ အန္တီမွတ်စလင် ဘုန်းကြီးများ ဆန္ဒပြနေစဉ်
လူငယ်တွေကြားမှာလည်း စံပြဖြစ်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း ဗဟုသုတကြွယ်ဝပုံပေါ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ ကျနော်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်း ငယ်ခန့်က စိတ်ဝင်စားစရာ စကားစမြည်ဝိုင်းကလေး တစ်ဝိုင်း ဖြစ်ဖူးတယ်။ ဒီဘုန်းကြီးက နိုင်ငံရေးနဲ့ နည်းပညာပိုင်းတွေမှာ စိတ်အားထက်သန်သလို သူ့ရဲ့ဘာသာ၊ သာသနာမှာလည်း ဟင်းလေးအိုးကြီးဖြစ်တဲ့အပြင် ဘာသာရေးတွေ၊ နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း ကုံလုံကျွမ်းဝင်တဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပါ။
ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ကျနော် လပေါင်းများစွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ အဆုံးမှာတော့ သူနေထိုင်သီတင်းသုံးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တွေ့ဆုံဖို့ အခွင့်အရေးတစ် ခု ရခဲ့တယ်။ လက်ဖက်ရည်ပွဲကလေးနဲ့အတူ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် မြန်မာပြည်က မတူကွဲပြားတဲ့လူနည်းစုများရဲ့ နိုင်ငံရေးပေါ်လစီတွေ အကြောင်း တစ်မနက်လုံး ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဆွေးနွေးလာလိုက်တာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ အနာဂတ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးမှာ ဒီမတူကွဲပြားတဲ့လူနည်းစုတွေ၊ ဘာသာခြားလူနည်းစုတွေကို အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပေးဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းရောက် လာပါတယ်၊ ကျနော်က ဒီအကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးရင်း ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကို မှားယွင်းစွာ ပြောထွက်လိုက်တဲ့ အချိန်ထိ စကားဝိုင်းကလေးဟာ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ဒီအခါမှာ ဘုန်းကြီးက ကျနော့်ကို အမှားပြင်ပေးဖို့ ကြိုးစားတော့တာပဲ။ သူပြောပုံက အစ္စလာမ်သာသနာဟာ မြန်မာဗုဒ္ဓအသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးကို ၀ါးမြိုတော့မယ့် ကင်ဆာရောဂါလို့ ၀ိသေသပြုသလို ရိုဟင်ဂျာတွေကလည်း တိုင်းတပါးသားတွေဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်ကြီးကို သူတို့ ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် သိမ်းသွင်းကြမယ့် လူတွေ၊ အဲသလို ဆိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စကလွဲလို့ပေါ့ဗျာ၊ တခြားအကြောင်းတွေမှာ သူပြောတာတွေက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တယ်၊ ဗဟုသုတရှိပုံရတယ်။ သူရဲ့ ဒီမှတ်ချက်မှာ ကျနော်ဘာကို သွားတွေ့သလဲဆိုတော့ဗျာ၊ ဒါက မတူကွဲပြားတဲ့ လူနည်းစုတွေအကြား အခြေအနေဟာ ၀မ်းနည်းဖွယ်အဖြစ် ပုံရိပ်ထင်လာသလို မွတ်စလင်တွေကို ဒီလိုမျိုး ပစ်ပစ်ခါခါကြီးမုန်းတီးနေတာဟာ လက်ခံဖွယ်အခြေအနေတစ်ရပ်အထိ ဘယ်လိုလုပ် ရောက်ရှိတာများပါလဲ။
အံ့သြစရာ အကောင်းဆုံး အချက်လို့ ဆိုနိုင်တာက ဒီလိုမွတ်စလင်မုန်းတီးရေးကိစ္စမျိုးက မြန်မာပြည်မှာ မဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ ၂၀၀၉ အစောပိုင်းလောက်မှာ တမီလ်ကျားသူပုန်တွေကို သီရိလင်္ကာအစိုးရ က နောက်ဆုံးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့အချိန်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ဒီလိုမျိုး မွတ်စလင်မုန်းတီးရေးက သီရိလင်္ကာ မှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
မြန်မာနဲ့ သီရိလင်္ကာတို့ဟာ နိုင်ငံရေးမှာရော လူမျိုးရေးအခြေအနေတွေမှာရော တကယ့်ကို ကွဲပြားခြားနားတယ်။ ဒါပေမယ့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ မဟိန္ဒိ ရာဇပသ အစိုးရလက်အောက်မှာ ကြီးထွားတိုးတက် လာတဲ့ အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက် နိုင်ငံရေးပေါ်လစီက၊ မြန်မာပြည်က အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အန္တီမွတ် စလင်ဘုန်းကြီးတွေ ကိုင်စွဲတဲ့ xenophobia ခေါ် အမုန်းတရားရောပြွမ်းတဲ့ အကြောက်လွန်ရောဂါနဲ့ ထိထိမိမိအံဝင်ဂွင်ကျကြီးကို ထပ်တူညီနေတော့ တာပါပဲ။
မြန်မာနဲ့ သီရိလင်္ကာတို့အကြားမှာ ရာစုနှစ်များစွာ ယဉ်ကျေးမှုချင်း စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံနေခဲ့တယ်။ ဒီလိုမျိုး မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်တွေ၊ နိုင်ငံရေး အမြင်ပေါ် အခြေခံတဲ့ အန္တီမွတ်စလင် ဘုန်းကြီးတွေ ပေါ်လာတာဟာဆိုရင်ဖြင့် (မြန်မာနဲ့ သီရိလင်္ကာတို့အကြား) ယဉ်ကျေးမှုချင်း ဖလှယ်ကြ တာတွေ ၊ အတွေးအခေါ်ချင်း ဖလှယ်ကြတာတွေအပေါ်မှာ အနည်းအကျဉ်းဖြစ်ဖြစ် တည်မှီနေတယ်။
အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် မြန်မာပြည်က ဘုန်းကြီး ၃၀၀ လောက်ဟာ သီရိလင်္ကာမှာ အခြေချနေထိုင်ကြတယ်၊ ဒီပမာဏက ပြည်ပအခြေ စိုက် မြန်မာဘုန်း ကြီးတွေ ထဲမှာ အများဆုံးပဲ။ ဒီလိုမျိုး သီဟိုဠ်ကျွန်းပေါ်မှာ မြန်မာဘုန်းကြီးတွေ ရောက်နေတာက အသစ်အဆန်း ကိစ္စလည်းမဟုတ် ဘူး။ သီရိလင်္ကာမှာ ကျင့်သုံးလာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးအစားကို ကမ္ဘာက (စိတ်ဝင်စားမှုမပြ) သေသေချာ ချာ မစူးစမ်းဘဲထားခဲ့တာဟာဆိုရင် တခြားနေရာတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အချိန်အားဖြင့် တော်တော် ကြာခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် မဟာယနကြီးစိုးချိန်နဲ့ ကိုလိုနီခေတ်မှာ အထိန်းချုပ်ခံ ဘ၀ရောက်ခဲ့ရချိန်တွေကြောင့် (ထေရ၀ါဒ) ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အကွယ်ဘက် ဦးတည်သွားခဲ့တယ်။
၁၉ ရာစုရောက်တော့၊ သီရိလင်္ကာ ခေါင်းဆောင်တွေက အတိတ်က ကွယ်ခဲ့တဲ့ ထေရ၀ါဒကျောင်းတွေကို ပြန်ပြီး အသက်သွင်းဖို့ လုပ်လာကြတယ်။ ဒီလိုလုပ်လာကြာတော့ မြန်မာပြည် ဘုန်း ကြီးကျောင်း တွေကနေ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီကို တောင်းခဲ့တယ်။
မြန်မာပြည်မှာလိုပဲ၊ သီရိလင်္ကာမှာလည်း ကိုလိုနီခေတ်တွင်း တော်လှန်ရေးတွေလုပ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ထူးခြားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ (အသုံးချ ခံ) ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၈၉၈ မှာ ဖွဲ့ခဲ့ ဗုဒ္ဓကလျာဏယုဝခေါ် ၀ိုင်အမ်ဘီအေက ခရစ်ယာန်တွေ မောင်ပိုင်စီးလာတာတွေ၊ ကိုလိုနီစနစ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကို တန်ပြန်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပဲ။ ၁၉၀၆ မှာ မြန်မာကလည်း သူတို့အိမ်နီးချင်း သီရိလင်္ကာနည်းလမ်းအတိုင်း အတုခိုးပြီး ၀ိုင်အမ်ဘီအေကို တည်ထောင်ခဲ့ တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များမှာတော့ တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ တော်တော်ကြီးနီးနီးစပ်စပ်ရှိတဲ့ အစွန်းရောက် သီရိလင်္ကာဘုန်း ကြီးတွေ တော်တော်အသံကျယ် လာကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သန့်စင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ၀ါဒဖြန့်နှိုးဆော်မှုတွေက အစိုးရရဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင် ရာ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အစီအမံဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အထောက်အပံ့သွားဖြစ်နေတယ်။ ဒါ့ပြင် မဟိန္ဒိ ရာဇပသအစိုးရရဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်း ဒီမိုကရေစီ အစီအမံအလုပ် အကိုင်တွေသာမက civil liberties လို့ခေါ်တဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ကျုံ့သွားအောင်၊ လျော့သထက် လျော့သွားအောင် လုပ်ကိုင် နေကြတာတွေရှိနေတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အပေါ်မှာ (ပြည်သူလူထုက ထားရှိတဲ့) အာရုံစူးစိုက်မှုတွေ ပျောက်သွားအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီလိုမျိုး ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ၀ါဒဖြန့်မှုတွေက ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ပြည်တွင်းစစ်ပြီးကတည်းက စပြီးလုပ်နေကြတာပဲ။
မြန်မာပြည်က သံဃာထုက အစိုးရကို အကြံပေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် တနည်းနည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ် သတ်နေတာကြောင့် သံဃာထုရဲ့ (နိုင်ငံရေး) လှုပ်ရှားမှုတွေ ဟာ စည်းဝင်ဘောင်ဝင် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ရဲ့ အပြင်မှာ အမြဲလိုလို ရှိနေတတ်တယ်။ အဲ၊ သီရိလင်္ကာမှာကျတော့ ဒီသာသနာပိုင် ဘုန်းကြီးတွေက National Heritage Party, or JHU လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကို ၂၀၀၄ မှာ ထူထောင်လိုက် တယ်၊ ဒီပါတီက ကိုယ်စားလှယ် (ရဟန်း)တွေဟာ ပါလီမန်မှာ ပါဝင်နေတယ်၊ ၂၀၀၇ ကျတော့ အစိုးရပိုင်းမှာပါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ပါဝင်လာ တယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အာရုံထားစိတ်ဝင်စားသူတွေအားလုံးက အမှန်ထက်ပိုတဲ့ ချဲ့ကားလံကြုတ်တွေကို ရင်းနှီးကျွမ်း ၀င်လာတယ်။ ဒီလိုဘဲ သီရိလင်္ကာက JHU ပါတီဝင် ရဟန်းတွေဟာ တမီလ်ကျားသူပုန်တွေကို အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အစိုးရကို အစွန်းတဖက်ရောက်တဲ့အထိ ထောက်ခံကြတယ်၊ ဒါပြင့် သူတို့တွေက နိုင်ငံရဲ့ (တမီလ်) မြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့ပိုင်းတွေမှာ လက်ရှိရှိနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ် ချုပ်ရေး အာဏာစက်ကို ကန့်သတ်ဖို့ အဆိုပြုချက်တွေ ဖြစ်လာအောင် တပ်သုတ်ရိုက်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ဖိအားပေးကြတယ်။
မြန်မာရဟန်းတွေကျတော့ JHU လိုပါတီမျိုးထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးကို ထက်ထက်သန်သန်ပဲ ဆန့်ကျင်တယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာက သီရိလင်္ကာရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်က လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဘလော့ဂါ ရဟန်းတွေဟာ ဒါမျိုးကိစ္စကို အတိအကျဆောင်ရွက် ကြဖို့ရာ အကြံပြုတင်ပြလာတာမျိုးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ် အတွင်းမှာ ပြုလုပ်လာတယ်။
သီရိလင်္ကာရဲ့ မွတ်စလင်ဦးရေက အနည်းအကျဉ်းပါပဲ၊ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိမယ်။ သူတို့တွေက ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ ၂၅ နှစ်လုံးလုံး အစိုးရဖက်မှာရော တမီလ်ကျား သူပုန်တွေဘက်မှာပါ ဓားစာခံတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက သူတို့ကို ဖမ်းဆီးတယ်။ ဒါတင်မက အမျိုးသားရေးလို့ အော်နေတဲ့ ရဟန်းတွေနဲ့ သူတို့ကို ထောက်ခံသူတွေက ဒီမွတ်စလင်တွေ ကို နိုင်ငံတွင်းကနေ မောင်းထုတ်ပြစ်ဖို့ နှိုးဆော်ကြတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာတုန်းကလည်း ဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့ သူတို့ကို ထောက်ခံသူတွေပေါင်းပြီး ရှေးဟောင်း တော်ဝင်မြို့တော် အနုရတ္ထပူရမှာ ရှိတဲ့ မွတ်စလင်အဆောက်အဦတွေကို ဖျက်ဆီးပြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီနှစ် (၂၀၁၂) ဧပြီမှာလည်း အချက်အချာကျတဲ့ ဒမ္ဗူလမြို့က ဗလီတလုံးမှာ မွတ်စလင်တွေ သောကြာနေ့ ဘုရားဝတ်ပြုနေစဉ် လူပေါင်း ၂၀၀၀ နီးနီးက အုပ်စုဖွဲ့ပြီး မွတ်စလင်တွေ ကို မောင်းထုတ်ပြစ်ခဲ့ တယ်။ ဒီလူအုပ်ကြီးကိုလည်း ရဟန်းတွေပဲ ဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
သီရိလင်္ကာရဲ့ အဓိက မီဒီယာတွေကလည်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကြီးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ဒီနိုင်ငံကြီးကို အစ္စလာမ်မိုင်ဇေး ရှင်းက ခြိမ်းခြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ချည့် ထပ်တလဲလဲ ထုတ်လွှင့်ပေးတယ်။ ဒီလိုမျိုး တထေရာတည်းဆိုသလို၊ ရခိုင်အရေး ကြီး ထဖြစ်တော့ မြန်မာပြည်တွင်း အန္တီအစ္စလာမ်အုပ်စုတွေက သီရိလင်္ကာမီဒီယာတွေ လိုမျိုး မေးခွန်းတွေထုတ် လာတယ်၊ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ ဗုဒ္ဓဘာ သာနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်၊ အစ္စလာမ်မိုင်ဇေးရှင်းက မြန်မာပြည်ကြီးကို ခြိမ်းခြောက်နေတယ် စတာတွေ (သီရိလင်္ကာနဲ့ ထပ်တူညီ) အသံကျယ်ကျယ် လုပ် လာကြတယ်။
သီရိလင်္ကာရဲ့ နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်းက ပြည်တွင်းစစ်အရှိန်ကြောင့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြီး ပြောင်းလဲသွားတယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့ လူနည်းစုအရေးတွေ၊ ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာ ထားရှိတဲ့ အပြန်အလှန်နား လည်မှုတွေလည်း ပြောင်းလဲကုန်တယ်။ နိုင်ငံရေးအယူတွေက ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်မီကထက် ပိုပြင်းထန် လာသလို ပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရန်လိုမှုတွေကလည်း ပိုပြင်းထန်လာတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး တစစ အရှိန်ရလာတာနဲ့အမျှ ခါးခါးသီးသီးကြီး ရန်လိုတဲ့စရိုက်တွေဖြစ် လာတော့တာပဲ။ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှဘူးလို့ ဆိုရမှာပဲ၊ သီရိလင်္ကာက အဲဒီလိုမျိုး အဆိပ်ပြင်းပြင်းတွေ ဟာ မြန်မာပြည် ဘက်ကို အအက်အကွဲကြီးအဖြစ် သမိုင်းတွင်မယ့် အချိန်ကောင်းမှာပဲ ကူးပြောင်းဝင်ရောက် သွားတော့တယ်။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တစ်ယောက် ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်ရသလို ဖြစ်နေတယ်။ ပထမက ရိုဟင်ဂျာတွေကို လိုချင်တဲ့ တတိ ယနိုင်ငံဆီ ပို့ပေးမယ်၊ ဒီနည်းနဲ့ ရခိုင်အရေး ကို ဖြေရှင်းမယ်လို့ ဆိုတယ်၊ အဲ နောက် လေးလလောက်အကြာ အိုဘာမားမလာခင် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်လည်းရောက်ရော၊ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်အင်ကို အစိုးရက သေသေချာချာကြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့ ဆန္ဒရှိတာပါလို့ ဖြစ်သွားပြန်ရော။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အနောက်တိုင်းနဲ့ ကောင်း မွန်တဲ့အဆက်အဆံလိုလားပုံကိုပဲ ရိုဟင်ဂျာတွေက ကျေးဇူးတင်ရမလိုဖြစ်နေပြန်ရော။ အဲတဖက် မှာတော့ သီရိလင်္ကာ အစိုးရကြီးက တမီလ်သူပုန်တွေကို ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့် တရုတ်နဲ့ ပလဲနံပသင့်ဖို့ အရမ်းအရမ်းကို လိုလားနေသလို အနောက်တိုင်းနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ သံတမန်တံတားတွေ ကိုလည်း လောင်ကျွမ်းဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်တယ်။
သီရိလင်္ကာနဲ့ မြန်မာရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းက နှစ်လမ်းသွား (အပြန်အလှန်) ဖြစ်နေတာကြောင့် နှစ်ဖက်နိုင်ငံ လူမျိုးစုတွေအကြား အဆက်အဆံကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်မယ်၊ (ပြီးရင် လိုသလို အသုံးချဖို့) အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခု ရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုး ဦးသိန်းစိန်ကို ( တင်ပြ အကြံပေးကြတယ်နဲ့) တူပါတယ်။ အိုဘာမားကတော့ မတူကွဲပြားခြင်းသည် အမေရိကန် အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်မှာ ပြောတဲ့ သူရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားတယ်။ တကယ်လို့သာ မြန်မာအစိုးရ က နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးကို အမှန်အကန်ကြီးလိုလားတယ်ဆိုရင်၊ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် အမုန်းတရားတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အမှန်တကယ်ကြီးကို (ဖယ်ထုတ်ပစ်သွားဖို့) လိုလားတယ်ဆိုရင်၊ အိုဘာမားပြောသွားတဲ့ အသွင်သဏ္ဌာန်ကို သူ့ရဲ့မူရင်းပုံစံမှန်အတိုင်း မဖြစ်မနေလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာမွတ်စလင်လူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးကို မိတ်ဆွေရင်းခြာပမာ ပြန်လည်ဆက်ဆံရမယ်လို့ လှုံဆော်ရင် အဲဒီလှုံဆော်မှုအသံက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာရော၊ ပြည်သူလူထုအမြင်နဲ့ ရပ်တည်တဲ့ တရားရုံးတွေမှာပါ သိပ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ (ထောက်ခံမှု) ရလဒ်တွေ ရလာလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်ပါတယ်။
သီးပွင့်ဝေဆာတဲ့အသိုက်အ၀န်းမျိုးရဖို့၊ တာရှည်ခံ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှု ရဖို့ဆိုရင်တော့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ (ဒီအရေးက ကာလတိုမှာ နိုင်ငံရေးရှုထောင့်အတွက် သိပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်မရှိပေမယ့်လည်း) ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ သီရိလင်္ကာက လူတွေပါ အမြော်အမြင်ရှိရှိလေ့လာနိုင်မယ့် သင်္ခန်းစာတစ်ခု လည်း ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
(အဲလက်စ် ဘွတ်ဘိုင်းဒါးသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အခြေစိုက်လှုပ်ရှားသည့် သုတေသီနှင့် နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။)
Posted: 23 Feb 2013 11:41 PM PST
Posted: 23 Feb 2013 11:31 PM PST
Having corresponded with him for many months, I finally hadachance to meet with him at his monastery, and we discussed Myanmar's ethnic politics duringatea-fuelled session lasting the better part ofaday.
The conversation was going well until I made the mistake of mentioning the word "Rohingya" in the context of giving all of Myanmar's ethnic and religious minoritiesastake in building the country's future.
Attempting to correct me, the monk insisted that Islam wasacancer eating away at the fabric of Myanmar's Buddhist society, as he characterised it, and claimed that the Rohingya were outsiders bent on conquering Myanmar for themselves. As he seemed otherwise rational and knowledgeable, I found his remarksasad reflection on the state of ethnic relations in Myanmar and how acceptable outright hatred of Muslims had become.
What might be most surprising about this exchange was that it did not occur in Myanmar, but in Sri Lanka in early 2009 at the time of the Sri Lankan government's vicious final assault on the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). While the political and demographic realities of Myanmar and Sri Lanka are very different, there are striking similarities between the ultra-nationalist political culture fostered under Mahinda Rajapaksa's government in Sri Lanka and the xenophobia of virulently anti-Muslim monks in Myanmar.
Roughly 300 monks from Myanmar reside in Sri Lanka, the largest such population outside of Myanmar itself, and their presence on the island is far from new. Buddhist practice in Sri Lanka has carried on uninterrupted for longer than anywhere else in the world, but periods of Mahayana influence and repression during the colonial period led to Buddhism's gradual decline by the early 1800s. In the 19th century, Sri Lankan abbots sought to revive the "pure" Theravada schools of the past, and called on Buddhist schools in Myanmar to provide the requisite ordination.
As in Myanmar, Buddhism in Sri Lanka took onaspecial significance in the struggle against colonial rule. Institutions such as the Young Men's Buddhist Association (YMBA), founded in 1898, were established to counteract the dominance of Christian and colonial power structures, and Buddhists in Myanmar emulated their Sri Lankan counterparts by establishingabranch of the YMBA in Yangon in 1906.
Radical Sri Lankan monks with close ties to the state have been extremely vocal in recent years. Their calls for ethnic and religious purity in Sri Lanka bolster the government's militaristic national-security agenda, and divert attention away from Rajapaksa's systematic dismantling of Sri Lanka's democratic institutions andconstriction of civil liberties since the end of the civil war in 2009.
Employing rhetoric that should be familiar to anyone paying attention to Rakhine State nowadays, the monks of the JHU were extremely supportive of Rajapaksa's efforts to eradicate the LTTE militarily, and have scuttled propositions for limited autonomy in the predominantly Tamil North and East of the country.
Sri Lanka's relatively small Muslim population, comprising roughly 10 percent of the population and often caught between both sides during the 25-year-long civil war, has also been singled out for ostracization by nationalist monks and their supporters. Last September, monks and their supporters destroyedaMuslim shrine in the ancient royal capital of Anuradhapura; in April of this year, monks leda2000-strong mob to chase away worshippers partaking in Friday prayers atamosque in the central city of Dambulla.
The mainstream media in Sri Lanka routinely repeats the myth that Sri Lanka isa"Buddhist Nation" under threat of Islamisation, and, as the tragedy in Rakhine has unfolded, has come out with pieces expressing solidary with anti-Muslim elements in Myanmar while characterising Myanmar in the same questionable terms.
Sri Lanka's political culture was changed profoundly by the civil war, and notions of religious and ethnic identity – highly politicised and polarised even before the war – took onadistinctly militant character as the war progressed. It is unfortunate that this vitriol has migrated to Myanmar at suchafragile juncture in history.
President U Thein Sein is walking onatightrope when it comes to the Rohingya issue. While his most recent statement just before Obama's visit on November 19th suggested that the government would be willing to properly address the problem of Rohingya statelessness, it was only four short months ago that he suggested the Rohingya be deported en masse asaviable solution to ethnic strife in Rakhine. The Rohingya might be thankful, then, that President U Thein Sein is keen to maintain good relations with the West, whereas Rajapaksa was all too happy to cosy up to China and burn diplomatic bridges as the offensive against the LTTE got underway.
As cultural interaction between Sri Lanka and Myanmarhas long beenatwo-way street, President U Thein Sein has, perhaps, been presented withahistoric opportunity to influence the state of ethnic relations in both countries. As Obama noted in his address in Yangon, diversity has only served to strengthen American society; if Myanmar's government is serious about political stability, the bête noire of successive military governments, it too must adopt this ethos as its own.
Yet both President U Thein Sein and Daw Aung San Suu Kyi are all too aware that adoptingapublically conciliatory tone towards the Rohingya – and Myanmar's Muslim population in general – would not play well at the monastery or in the court of public opinion.
While it may not be politically expedient in the short term, Myanmar's leaders need to take decisive action on the Rohingya issue now in order to ensure long term stability, prosperity, and peace –alesson that their Sri Lankan counterparts would also be wise to learn.
(Alex Bookbinder isaresearcher and political analyst based in Southeast Asia.)
Posted: 23 Feb 2013 08:55 PM PST
By Harry Mdy
လေးစားချစ်ခင်အပ်ပါသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ -
ဤကမ္ဘာပေါ်မှာ အတူတူနေကြတဲ့ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ အသားအရောင်၊ ယုံကြည်ချက်မရွေး ညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံးအပေါ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က 'အတ်စလားမ်မုအလိုင်းကွမ်း(မ်)' (ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု အပေါင်း၊ အသင်တို့အပေါ်ကျရောက်ပါစေလို့) နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။
ယနေ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်သေပြချက်မရှိ၊ အထောက်အထားမရှိပဲ တစ်ဖက် သတ်ဆန်စွာ၊ ရိုင်းစိုင်းစွာ၊ စွပ်စွဲထားတဲ့ စွပ်စွဲချက်များဟာဆိုရင် တည်ငြိမ်မှုပျက်ပြားအောင် အေးချမ်းသာယာမှု ပျက်ပြားအောင် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအကြားမှာရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြိုကွဲအောင် အကျိုးပျက်စီးအောင် တမင်ကြံဆောင်ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတဲ့ သဘောကိုသက်ရောက်နေပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး၊ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ နေထိုင်နေကြတာကို မနာလို၊ မရှုစိမ့် တဲ့သဘောမျိုးဆန်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်နေတာကို ညီညွတ်ရေးပျက်ပြားပြီး အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ပြီး သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုကို ဦးတည်ရည်ရွယ်နေပါတယ်။
အမှန်တကယ်မှာတော့ သဘောထားရိုးဖြောင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မိမိစွပ်စွဲချင်တာ၊ မိမိသိချင်တာတွေကို သမိုင်းပညာရှင်တွေ အစ္စလာမ်ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးအရင်ဆုံးမေးမြန်းညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ဒီလိုအနိဋ္ဌာရုံတွေ နောက်နောင်ကိုမဖြစ်ရလေအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာကို သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ စိတ်စေတနာဖြူစင်သန့်ရှင်းစွာ နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးအမ၊ ဂျူးဘာသာရဲ့အဆုံးအမ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို ကျောခိုင်းမျက်ကွယ်ပြုပြီး မှတ်ပုံတင်အမှတ်မပါ နေရပ်လိပ်စာအတိအကျမပါပဲ ကိုယ် ထင်ရာတွေကို ကိုယ်စွပ်စွဲရေးသားပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်မယူရဲတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို Online ပေါ်မှာဖြန့်နေတာကိုက သူရဲ့ မူလစိတ်ရင်းမှန်ကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီလို မတော်တရော်ဖန်တီးပြီး Online ပေါ်မှာဖြန့်နေတဲ့ "Islamization" ပြုလုပ်နေပါတယ် ဆိုတဲ့သတင်းမှာကြီး ကိုတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ အတူတကွပူးတွဲနေထိုင်ရေး၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလိုလားတဲ့ ကျွန်တော်တို့မွတ်စ လင်မ်လူငယ်တွေကတော့ အထောက်အထားများနှင့်တကွ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်။ အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ အဖျက်သမားတွေရဲ့ ပယောဂထဲကိုအငိုက်မမိစေဖို့ ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ရဲ့ နေပုံ၊ ထိုင်ပုံ၊ ပြောပုံ၊ ဆိုပုံတွေကို ပြန်လည်သတိပြုသုံးသပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီးဖြေရှင်းတုံ့ပြန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Islamization ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ပရ၀ုဏ်မှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ ဝေါဟာရအရလည်းကောင်း၊ အနက်သဘောအရလည်းကောင်း မရှိတဲ့စကားလုံး၊ အသုံးပြုခြင်းမရှိတဲ့ စကားလုံးပါ။ အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ငြိမ်းချမ်း ခြင်း၊ အမိန့်နာခံခြင်း ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ သူတစ်ပါးအပေါ်လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူခြင်း၊ ဖိနှိပ်ကျွန်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးတွေ မဟုတ် ပါ။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တောင် စစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အတော်ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာ သူတစ်ပါး ကိုပါ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အတော်ကြိုးစားနေရတဲ့အချိ်န်မှာ သူတစ်ပါးကိုပါအစ္စလာမ်ဘာသာထဲ အတင်းယုံကြည်ဝင်ရောက်ဖို့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ရေးဟာ မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စပါ။ အစ္စလာမ်ကို ဒီလောက်တော်ကြောက်ကန် နေမယ်ဆိုရင်တော့ မိုးပြိုမှာကိုအတိုင်းမသိကြောက်ရွံနေတဲ့ သတ္တ၀ါငယ်ကလေးတစ်ကောင်လိုများ ဖြစ်နေပါပြီလား။ စားမ၀င်၊ အိပ်မပျော်နဲ့ အကြောက်လွန်ခြင်းဟာ မိမိကိုယ်မိမိဒုက္ခပေးခြင်းတစ်မျိုးပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာသာတရားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာတရားကမျှ အခြားဘာသာတရားကို ကြောက်လန့် စေဖို့ချောက်လှန့်မထားပါဘူး။ တိုက်ခိုက်တော်လှန်ဖို့လည်း လမ်းမညွှန်ထားပါဘူး။ ဘာသာတရားတစ်ခုကို ယုံကြည်သက်ဝင် ခြင်းဟာ စိတ်အေးချမ်းသာယာခြင်း၊ သောကကင်းဝေးခြင်း၊ လူသားတွေအပေါ်မှာ ညှာတာထောက်ထားခြင်းကိုပဲဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာတရားအပေါ်မှာ ကိုယ်ကခိုင်ခိုင်မာမာ သံဓိဋ္ဌာန်ချပြီးယုံကြည်ထားသူတစ်ယောက်အတွက် ဘာကိုမျှဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါသည် ငါ့ဘာသာတရားအပေါ်အမှန်တကယ် ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပြီးလား လို့မေးခွန်း ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ(၉၉)ရာခိုင်နှုန်းမှာ စစ်တပ်ရှိပါတယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာက လက်နက်ကိုင်ထားတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကျူးကျော် ရန်စလာမယ်ဆိုရင်တော့ လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို လူသတ်ဂိုဏ်းဖွဲ့ထားပါတယ်လို့ စွပ်စွဲမလား။ အေးချမ်းစွာ နေလိုသူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတိုင်းမှာဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်လာမယ် ဆိုရင်တော့ သတိပေးမယ်။ ဆက်ပြီးကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာကို ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံးက တစ်ညီ တစ်ညွတ်တည်း လက်ခံထားပါတယ်။ ဒီလိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ရတာကို လူ့အသက်သတ်တဲ့အတွက် အပြစ်(Sin)ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးလူမိုက် အကြိုက်လိုက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးမလို့လား။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒပြန့်ပွား ရေးအတွက် အစ္စလာမ်မဟုတ်သူတွေကို သတ်ပစ်ရမယ်။ ဒါမှကုသိုလ်ရပြီးကောင်းကင်ဘုံကို ရမယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ဟာ ဘယ် အပေါ်မှာ အထောက်အထားပြု အခြေခံထားသလဲ။ ဒီစွပ်စွဲချက်မှန်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေမှာ လက်နက်တိုက် ကြီးတွေ လက်နက်စက်ရုံကြီးတွေ အဆမတန်ကြီးမားတဲ့ စစ်သည်အင်အားတွေ အဆမတန်မြင့်မားလှတဲ့ စစ်အသုံးစရိတ်တွေ ဆောက်လုပ်သုံးစွဲမှာပေါ့။ နျူကလီးယားဗုံးတွေထုတ်ပြီး မွတ်စလင်မ်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြဲချလိုက်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ လက်နက်တိုက်ကြီးတွေ လက်နက်စစ်ရုံကြီးတွေ စစ်သည်အင်အား အကြီးအကျယ်ထူထောင် နေတာတွေ အခြားနိုင်ငံအပေါ်အနုမြူဗုံးချခဲ့တာတွေဟာ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေလား။ အခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေလား ဆိုတာ တစ်ချက်လောက်စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦး၊ ဘာမှမသိပဲ မွတ်စလင်မ်ကိုမုန်းတီးရုံမျှနဲ့ မစွပ်စွဲလိုက်ပါနှင့်။
မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုလည်းကောင်း၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က စေလွှတ်တဲ့တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်ကိုလည်းကောင်း မိမိတို့ရဲ့အသက်ထက်ပိုချစ်တယ်ဆိုတာဟာ မှန်ပါတယ်။ ဒါအထူးအဆန်းတစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုချစ်ကြောက်ရိုသေမှာပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ ယေရှုသခင်ကို ချစ်ခင်မှာပါ။ မွတ်စလင်တစ်ဦးရဲ့ အသက်ဟာကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ဖြစ်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးရဲ့ အသက်ဟာပိဋကတ်သုံးပုံ ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ဟာလည်း (BIBLE) သမ္မာကျမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဘာသာရဲ့ကျမ်းကမှ ကိုယ့်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူကို သတ်ဖြတ်ပစ်ရမယ်လို့ မညွှန်ကြားထားပါဘူး။
အကယ်၍ ဦးနှောက်ရှိမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူမှန်သမျှ ကိုသတ်ပစ်ရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း(၆၀၀၀)မှာ မွတ်ဆလင်မ်လူဦးရေက သန်း(၂၀၀၀)လောက်ပဲရှိတာ။ ဒီလူဦးရေ သန်း(၂၀၀၀)က ကျန်လူဦးရေ သန်း(၄၀၀၀)ကို သတ်ပစ်ရမယ်ဆိုတာ အရူးတစ်ယောက်တောင်လက်မခံနိုင်တဲ့ အဆိုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်တော့ပြောဖို့လိုပါတယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူတွေ ကိုသတ်ပစ်ရမယ်လို့ ကုရ်အာန်ကျမ်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာ ပြောထားသလဲ။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကလက်ခံထားတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းဟာ"လူသတ်ကျမ်း"လို့စွပ်စွဲလိုက်တာဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကိုစော်ကားလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစွပ်စွဲစော်ကားသူဟာ ဘာသာတရားတစ်ခုကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင် သူယုံကြည်ကိုး ကွယ်နေတဲ့ ဘာသာတရားကသူ့ကို ဒီလိုပဲတစ်ဖက်သတ်စွပ်စွဲဖို့ ညွှန်ကြားနေပါသလား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ သူကိုယ် တိုင်က စိတ်ကျရောဂါ(သို့မဟုတ်) စကီဇိုဖရီးနီးယားလို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားနဲ့ ရူးသွပ်နေသူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ လူသတ်ဖို့မပြောနဲ့ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ သက်ရှိတစ်စုံတစ်ရာကို တောင်သတ်ဖြတ်ခွင့်မပေးထားပါဘူး။ ဒီအချက်ကို ကုရ်အာန်အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြပါရစေ။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် (ကဏ္ဍ ၁၇း ပါဒတော် ၃၃)တွင် " သင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က တားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသော မည်သည့်သက်ရှိတစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သတ်ဖြတ်အဆုံးစီရင်ခြင်း မပြုကြလေနှင့်။ မတော်မတရား သတ်ဖြတ်အဆုံးစီရင် ခံရသူဘက်မှ လိုက်ပါအရေးဆိုနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာကို ငါအလ္လာဟ် အရှင်မြတ် စီမံပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ အဆုံးစီရင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယေက်ကမျှ တရားမျှတမှု ကိုကျောခိုင်း၍ အလွန်အကျွံ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါစေနှင့်။ ဧကန်အမှန်ပင် မတော်မတရားဖိနှိပ်သတ်ဖြတ် ခံရသူ တစ်ဦးအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်သည်။" (၁၇း၃၃)
ရှင်းလင်းချက်။ ။ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အားသာချက်ရှိနေသူတို့က အားနည်းချက်ရှိသူတို့အား ဖိနှိပ်ရက်စက်နေခြင်းက တရားမျှတမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းရက်စက်ခြင်း၊ လူမဆန်ခြင်း အစရှိသည့်လက္ခဏာမျာကို ရည်ညွှန်းပြသလျက် ရှိသည်။ မိမိတို့၏အားသာချက်တစ်စုံတစ်ရာကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ တစ်ဖက်သားအပေါ် ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည် လိမ္မာယဉ်ကျေးသော လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသော လုပ်ရပ်မဟုတ်ပေ။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်က တိုးတက်သော လိမ္မာယဉ်ကျေး သော လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကို ထူထောင်နိုင်ရင် အဓိကကျသော အခြေခံအချက်အလက်များတွင် တရားမျှတမှုရှိခြင်းက လည်းအခြေခံအချက်တစ်ရပ်အဖြစ်ပါဝင်လေသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က တိကျမှန်ကန်စွာတရားစီရင်ခြင်းမရှိဘဲ လူသားတစ်ဉ်ီးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှေင့်ခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ သေဒဏ်ပေးခြင်းတို့ကို လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးအပေါ် ကျူးကျော်စော်ကားခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားလေ သည်။ ကုရ်အာန် (၅း၃၂)တွင် "ဘနီအီစ်ရာအီးလ်" မျိုးနွယ်များကို အကြောင်းပြု၍ အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားလေသည်။
"ဧကန်အမှန်ပင် မည်သူမဆိုလူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်အား အသက်တစ်ချောင်း၏ အစားမဟုတ်သလို တိုင်းပြည်၌ ဆူပူသောင်းကျန်းနေခြင်းလည်းမဟုတ်ဘဲ သတ်ဖြတ်အဆုံးစီရင်ခဲ့ပါလျှင် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအား သတ်ဖြတ်အဆုံးစီရင်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် မည်သူမဆိုလူသားတစ်ဦး၏ အသက်ရှင်သန်ရေးကို ဖေးမကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လူသားထု တစ်ရပ်လုံးအား ဖေးမကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။" (ကုရ်အာန် ၅း၃၂)
အစ္စလာမ်က တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာကို တိကျမှန်ကန်စွာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ပြဋ္ဌာန်း လျက်ရှိသည်။ မတော်မတရား ဖိနှိပ်စော်ကားခံရသူဘက်မှ ရပ်တည်အကာအကွယ်ပေးကြရန်ကိုလည်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထား လေသည်။ အလားတူတရားစီရင်ရာ၌ တစ်ဖက်စောင်းနင်းပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ် မမျှတစွာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဂတိတရားလေးပါး လက်ကိုင်ပြု၍တစ်ဖက်သတ် အလွန်အကျွံဖိအားပေး၍ အမိန့်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတို့ကို လုံးဝမပြုလုပ်ရန် တားမြစ် ထားလေသည်။ ထိုသို့ ပြုခဲ့ပါမူ "တရားကိုနတ်စောင့်သည်" ဟူသော ဆိုရိုးစကားကဲ့သို့ပင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မတော် မတရား ဖိနှိပ်ခံရသူတို့ဘက်မှ ရပ်တည်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေး သတိပေးထားလေသည်။
"မည်သူမဆို မ်ိမိသည် မတရားဖိနှိပ်စော်ကားခံခဲ့ရသည့်အပေါ် (မိမိခံစားရသည်နှင့်အညီ) ပြန်လည်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့ လျှင်ယင်းကိစ္စသည်တစ်စုံတစ်ရာ ပြစ်တင်ဖွယ်ရာမရှိပေ။"(ကုရ်အာန် ၄၂း၄၁)
"အမှန်တကယ်မှာမူ အမှန်တရား၊ သစ္စာတရားကို ကျောခိုင်း၍လူသားထုအပေါ် မတော်မတရားဖိနှိပ်ရက်စက်နေကြ သူများ၊ တိုင်းပြည်အတွင်း၌ ဆူပူသောင်းကျန်းနေသူများအပေါ်၌သာမူ ဝေဖန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချဖွယ်ရည်ဖြစ်သည်။ သူတို့အတွက် ပြင်းပြနာကျင်ဖွယ်ရာသော ပြစ်ဒဏ်များရှိလေသည်။"(ကုရ်အာန် ၄၂း၄၂)
"သို့ရာတွင်အကြင်သူတစ်ဦးသည် (မိမိမတရားစော်ကားခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍) သည်းခံခွင့်လွှတ် သင်ပုန်းချေခဲ့မည်ဆို လျှင်ဧကန်အမှန်ပင် ယင်းသို့သောပြုမူဆောင်ရွက်ချက်သည် အရေးအရာကိစ္စရပ်များကို နက်နက်နဲနဲ စဉ်းစားသမှုပြုပြီး ခိုင်ခိုင် လုံလုံ သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်နိုင်မှုတစ်ရပ်သာလျှင်ဖြစ်သည်။" (ကုရ်အာန် ၄၂း၄၃)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က မတရားဖိနှိပ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လျော်ညီသော လက်တုံ့ပြန်မှုကို ခွင့်ပြုထားသောလည်း ရေရှည်အကျိုးတစ်ရပ်ရပ်ကို ငဲ့ကွက်ပြီးခွင့်လွှတ်သင်ပုန်းချေမှုကို အထူးအရေးပေးဖော်ပြထားလေသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၁၄၀၀)လောက်စပြီး အစ္စလာမ်က အခြားဘာသာတွေနဲ့ စစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မတိုင်မီက ဘာသာ တရားတွေမှာ စစ်ဖြစ်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သမိုင်းကိုမသိဖူး၊ နားမလည်ဖူးလို့ပဲ မှတ်ချက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ တမန်တော်မြတ် မပွင့်ပေါ်မီ ကတည်းကကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်မီးတွေအများကြီးတောက်လောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ဂျူးတို့ရဲ့ ဂျေရုစလင်မ်မြို့တော်ကြီး ဟာရောမရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဂရိတို့ရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အစ္စူလာမ်သည်လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသည်လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်လည်းကောင်း စနစ်တစ်ခု အပေါ်အခြေခံထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတိုင်းက မိမိတို့ဘာသာတရားရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ကျင့်စဉ်၊ ကျင့်ရပ်တွေ စနစ်ဇယားတွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ချပြပြီးတရားဟောပါလိမ့်မယ်။ စည်းရုံးပါလိမ့်မယ်။ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးကို လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ကိုမကောင်းပါဘူး။ မတရားပါဘူး။ Islam will dominate the whole world ဆိုပြီး Buddhism will dominate the whole world ဆိုပြီး Chustiom will dominate the whole world ဆိုပြီး အကြောက်အကန်လန့်ဖျပ်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ လူသားတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးသားပါ။ ဘာကိုယုံကြည်လက်ခံ ရမလဲသူတို့သိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအများက ကြိုက်လို့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်လည်း အခြားဘာသာတွေက ဘာမှမနာလို ငြူစူ ပြီး ကလိတာ၊ ထေ့ငေါ့တာလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ လူတိုင်းက ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် ကိုယ့်ဘာသာတရားကို အလေးထားပြီး ချစ်မြတ်နိုး ကြမှာပါ။ ဒါကိုမှားတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို မိမိနှစ်သက်လို့ မိမိယုံကြည်လို့ ကိုးကွယ်တာကိုမှားတယ်လို့ ဘယ်သူကမှ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘာသာတရားတွေကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူ အချင်းချင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာက အလေးထားရမယ့်ကိစ္စပါ။ အစ္စလာမ်မှာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ အခြားဘာသာဝင်တွေကို သတ်ဖို့မပြောနဲ့ "သင်တို့သူတို့ကို မကောင်းမပြောရဘူး၊ ပြက်ရယ်မပြုရဘူး၊ မစော်ကားရဘူး၊ "ဆိုပြီးအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လက်မခံ ရင်မွတ်စလင်မ်ရဲ့စည်းဘောင်အပြင်ဖက်ကို ရောက်သွားရမယ်လို့ အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာကို သိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့အခုစွပ်စွဲနေတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေက ဘာသာခြားတွေကိုသတ်ပြီး အစ္စလာမ်ကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက် ကစိတ်ကျရောဂါကိုခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကယောင်ကတမ်းမြင်မက်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လူသတ်ပြီးဘာသာတရားကို စည်းရုံးချဲ့ထွင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ လူတွေကကိုယ့်လို အရူးမဟုတ်ဖူးနော်။ ကိုယ်ကသာ ကြောက်လန့်ပြီး လက်ခံချင်လက်ခံလိုက်ဦးမှာ၊ လူတွေကကိုယ့်လို ကြောက်စိတ်ရှိချင်မှရှိမှာပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဓါးကိုကြောက်လို့ ယုံကြည်ချက်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ လူပျော့၊ လူညံ့တွေရဲ့အလုပ်ပါ။ အစ္စလာမ်မှာ ဓါးကိုကြောက်လို့ယုံကြည်ချက်ပြောင်းပြီး အစ္စလာမ်ထဲဝင်လာသူတွေအတွက် နေရာမရှိပါ။ နေရာမပေးပါ။
"အစ္စလာမ်ထဲသို့ မ၀င်ပဲငြင်းပယ်သူများကို နေရာမရွေးသတ်ကြလော့"ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို -
………. Kill the unbelievers (non – muslim) where you find them (Quran 9:5) ဆိုပြီး မှားယွင်းစွာရေးထားတာကို လည်းတွေ့ရပါတယ်။ အမှန်တကယ် ကုရ်အာန်ကျမ်းမှာပါတဲ့ အရဗီဝေါဟာရက Unbelievers ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မသက်ရောက်ပါ။ ပိုဆိုးတာက non – muslim ဆိုပြီး ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ဖြည့်စွက်လိုက်တဲ့ စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း ကုရ်အာန်မှာ non – muslim (မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူ – ဂိုင်းရ်မွတ်စလင်မ်) ဆိုတဲ့အရဗီဝေါဟာရလုံးဝမပါရှိပါ။ ဒါကိုက အခြား ဘာသာတွေက မွတ်စလင်မ်တွေအပေါ်အမြင်မကြည်အောင်ရန်တိုက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ကုရ်အာန်(၉း၅)မှာ ပါရှိတဲ့ဝေါဟာရက "မွတ်ရ်ှရေကီးန်" (Mushrikeen) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရဗီဝေါဟာရရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က "အစ္စလာမ်ထဲသို့ မ၀င်ပဲငြင်း ပယ်နေသူများ" (non – muslim) မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများ လို့အဓိပ္ပါယ်မထွက်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်အမှန်က "အစ္စလာမ် ဖြစ်ပါလျက်နှင့် အစ္စလာမ်ကိုတုပဖျက်ဆီးသူ"လို့အဓိပ္ပါယ်ရရှိပါတယ်။ "မိစ္ဆာကောင်"တွေပေါ့၊ ကုရ်အာန်ကသူတို့ကိုသော် လည်းကောင်း၊ သူတို့ရဲ့စနစ်ဇယားကိုသော်လည်းကောင်း၊ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးချေမှုန်းပစ်ဖို့ပြောနေတာပါ။ မိစ္ဆာကောင်ကိုလည် ပင်းဖက်ပြီးပေါင်းပါလို့ ဘယ်ဘာသာတရားကညွှန်ကြားထားပါသလဲ။ ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဘာကြောင့်များ အကြောက် လွန်နေရပါလိမ့်။ ကုရ်အာန်(၄၇း၎)ကလည်း ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ။ မိမိကိုယ်တိုင်အရဗီကိုနားမလည်ပဲ၊ ကုရ်အာန်ကိုနားမလည် ပဲအကြောက်လွန်ပြီး အိပ်ရေးတွေပျက်နေတာတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းတာက အစ္စလာမ်မဟုတ်သူတစ်ယောက်က အစ္စလာမ်တွေ ယုံကြည်တဲ့ကျမ်းချက်ပါ စကားလုံးတွေကို အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင် ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းပါပဲ။ Unbelievers ဆိုပြီး non – muslim ဆိုပြီးမူရင်းကျမ်းမှာ မပါတဲ့ ၊ မူရင်းကျမ်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဝေါဟာရတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာနဲ့ ကြံစည်လုပ်ဆောင်ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါကဘာသာတရားတစ်ခုကို စော်ကားလိုက်ခြင်းပါ။ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်နဲ့ လက်တွေ့ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ လတ်တလောမှတင် အစ္စလာမ်မဟုတ်သူဘာသာခြားတစ်ယောက်က အစ္စလာမ်ကို စော်ကား လိုက်ပါပြီ။ ဘယ်မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက်ကမှ အခြားဘာသာရဲ့ကျမ်းကို လုပ်ကြံစော်ကားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမရှုထောင့်ကကြည့်ရင် အင်မတန်မှ အပြစ်ကြီးတဲ့ကိစ္စပါ။ အစ္စလာမ်မှာအခြားဘာသာတရားရဲ့ ဘုရားကျောင်းကန်တွေ၊ အမွေအနှစ်တွေ၊ ကျမ်းစာအုပ်တွေ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးးမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ကုရ်အာန်မှာ အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထား ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မရိုမသေမလေးမစားလုပ်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှားဟာ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံပါ။ အဲ့ဒီမှာ "ဗောရော ဗုဒု"စေတီ တော်ရှိပါတယ်။ လေးလေးစားစား ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မှာ အလွန်ခံ့ညားတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ပြခန်းနဲ့ ဂေါတမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အမွေအနှစ်တွေရှိပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားမွတ်စလင်မ်တွေ အမြတ်တနိုးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စုကိုအရှင်ဒေါက်တာ ဥာဏိတ္တရသိပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အင်မတန်မှဥာဏ်တော်မြင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကြီးရှိပါတယ်။ အာဖဂန်က မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ဒီဆင်းတုတော်ကြီးကို နှစ်ပေါင်းများစွာမူမပျက် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ၀မ်းနည်းစရာ၊ ယူကျုံးမရစရာ အဖြစ် တစ်ခုကတော့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် "တာလီဘန်"တစ်စုရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြိုပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မ်နိုင်ငံအတော်များ များက မဖျက်ဆီးဖို့အတွက် တာလီဘန်တွေကိုတားဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နားတစ်ဖက်၊ မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲပါတဲ့ တာလီဘန် တွေဟာ ဇွတ်တရွတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ အာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ သမိုင်းတစ်ခု ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ပါ။ သံဝေဂယူရမဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ရပ်ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်ရှုံးလို့လူမျိုးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာ ဘာသာတရားပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာ အသိတရား မဲ့နေသူတွေရဲ့အယူအဆတစ်ရပ်ပါ။ မွတ်စလင်မ်တွေ စစ်ရှုံးဖူးပါတယ်။ ဘဂ္ဂဒက်မြို့ကြီးကိုမွန်ဂိုတွေ ၀င်သိမ်းတဲ့အခါမှာ တစ်မြို့ လုံးမွတ်စလင်မ် အရိုးတွေတောင်လိုပုံနေခဲ့ပါတယ်။ ချောင်းတွေ၊ မြောင်းတွေထဲမှာ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ သွေးတွေစီးဆင်းနေခဲ့ပါ တယ်။ အလားတူ ဂျူးလည်းစစ်ရှုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ခရစ်ယာန်လည်းစစ်ရှုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ဘယ်လူမျိုးမှ မပျောက်သလို ဘယ်ဘာသာမှ လည်းမပျောက်ပါဘူး။ လူမျိုးပျောက်တယ်။ ဘာသာပျောက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြင့်တက်အောင် မကြိုး စားရင် ကိုယ်ဘာသာတရားကို ကိုယ်အလေးမထားရင် ဇာတ်တူသားစားရင် လူမျိုးပျောက်သွားမယ်။ ဘာသာလည်းပျောက် သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အသုံးမကျမှု၊ မသိနားမလည်မှုတွေကို ပြုပြင်သွားမယ့်အစား အခြားလူမျိုးတစ်မျိုးကိုခေါင်းပုံလွှဲချခြင်း မပြုပါနှင့်။
Bangladesh (ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ) မူလက ဟိန္ဒူနိုင်ငံ စသည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုကြီးပြီး လူဦးရေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေ တောင်မခံနိုင်ပဲ လူမျိုးလည်းပျောက်၊ ဘာသာလည်းပျောက်ခဲ့ရပါတယ် လို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြချက်တွေမှာ မှားယွင်းနေတဲ့အချက်တွေ ရာနှုန်းပြည့်ပါဝင်နေပါတယ်။ တူရကီနိုင်ငံဟာမူလက ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလားတူ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံတို့ဟာလည်း မူလကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဆိုတာ လည်းမဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှု၊ ရိုးရာကိုးကွယ်မှုတွေက အများစုပါ။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဆိုတာလည်းမူလက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထောက်အထားမရှိပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့"ဘာမီယန်"အရပ်မှာ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီအရပ်ကို ရှင်ဂေါတမရောက်ခဲ့ဖူးတယ်လို့တော့ သမိုင်းမှတ်တမ်းအချို့ရှိပါတယ်။ "အာဖဂန်နစ္စတန်"ဆိုတဲ့ နာမည် ကိုက "ပဟ်လ၀ီ (Phelavi)"ဘာသာစကားဖြစ်နေပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ ဟိန္ဒူနိုင်ငံတွေ မဟုတ်ပါဖူး။ ပါကစ္စ တန်ဆိုတာက "ပါးက်"ဆိုတဲ့ အူရ်ဒူစကားနဲ့ "အစ်တန်"ဆိုတဲ့ အူရ်ဒူစကားကဆင်းသက်လာတာပါ။ "သန့်ရှင်းသောနယ်မြေ"လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေက "ဟိန္ဒူ"တွေရဲ့ လက်အောက်မှာမနေလိုပဲ ခွဲထွက်ခဲ့တာကြောင့် "ပါကစ္စ တန်"ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ယခင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေပါ။ နောက်ပိုင်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံ လက်အောက်ကခွဲထွက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ယခင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေပါ။ နောက်ပိုင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံလက်အောက်က ခွဲထွက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစွန်းရောက်မွတ်စလင်မ်တွေ အကြမ်းဖက်နေတာ၊ ဗုံးခွဲနေတာ မွတ်စလင်မ်ထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အာဏာရဖို့ သူတို့ရဲ့ဒေသတွေကို သူတို့ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စ တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ "အိုစမာဘင်လာဒင်" အသတ်ခံရတာကို ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်အများစုက ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မတုံ့ပြန် ကြပါဘူး။
ကောင်းကင်ဘုံမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကာမစပ်ယှက်ဖို့ အပျိုစင်(၇၂)ယောက်နဲ့ လူပျိုပေါက်(၂၈)ယောက်ပေးထား မယ်လို့ မတော်မတရား ရေးပြထားပြန်တယ်။ အဲ့ဒီရေးသားချက်ကို မယုံရင်ကုရ်အာန်နဲ့ အထောက်အထားပြမယ်လို့ ပြောပြီး အောက်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာနဲ့ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ စာပိုဒ်တွေရေးပြထားတယ်။ ကုရ်အာန်ဟာ အရဗီဘာသာနဲ့ကျလာတာ ပါ။ မူရင်းကိုပြမယ်ဆိုရင် အရဗီနဲ့ရေးထားတာကိုပဲပြရမှာပါ။ ကုရ်အာန်ဟာ အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်တုံးက ဘယ်လိုရောက်ရှိလာသလဲ ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောင်မသိပါဘူး။ အကယ်၍ ဘာသာပြန်ဆိုရင်လဲ မူရင်းအရဗီနဲ့မှန်မမှန် ပြန်တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
မွတ်စလင်မ်အမျိုးသားတစ်ယောက်က အမျိုးသမီး(၄)ယောက်ယူပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကလေး(၅)ယောက် နှုန်းနဲ့ ကလေးအယောက်(၂၀)မွေးပြီးရင် မိသားစုတစ်စုမှလူဒီလောက်အများကြီးကို အိမ်ထောင်သည်ယောက်ကျားက ဘယ်လို ကျွေးနိုင်မှာလဲ။ စဉ်းစဉ်းစားစားလဲ ပြောကြပါဦး။ ဘာကြောင့်များမွတ်စလင်မ်ကို ဒီလောက်အထင်ကြီးနေရပါလိမ့်။
တမန်တော်မြတ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေဟာသမိုင်းမှာ အမည်နာမနှင့်တကွ အထင်အရှားမှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ လက်နက်ချ အရှုံးပေးခဲ့တဲ့ ဂျူးလူမျိုး ၆၀၀ကျော်ကနေ ၉၀၀လောက်အထိကို ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဟာ ဘယ်စစ်ပွဲလဲ။ အမည်ကိုပြောနိုင်သလား။ အထောက်အထား အတိအကျရှိရဲ့လား။ တမန်တော်မြတ်က အလ္လာဟ်ဆီက အာရုံရလို့ အမျိုးသမီး တွေကိုမုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲတာဟာ အင်မတန်မှယုတ်ညံ့တဲ့ ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ စွပ်စွဲချက်ပါ။ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တစ်ယောက်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ သူများဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၊ အကြီးအကဲတစ်ပါးကို ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့ ညစ်ညမ်းရိုင်းပျတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မိမစစ်၊ ဖမစစ်ဆန်စွာ စွပ်စွဲရေးသားပြောဆိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ဟာ မုဒိမ်းမှုကိုကျူးလွန်တယ်လို့သတ်မှတ် ပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူ တစ်ယောက်ဟာ မုဒိမ်းမှုကိုကျူးလွန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြောဆိုဖို့ ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားပြဖို့ စွပ်စွဲသတ်မှတ် ပြောဆိုသူမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဘာသာရေးဆူပူမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာမှုကို ပျက်ပြားအောင်သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်မ တန်အကြံပက်စက်စွာ လုပ်ကြံဖန်တီးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ အသိရှိပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးပျက်စီး အောင်အကွက်ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို ဘယ်လိုမှဝင်ရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုပဲ ဖြေရှင်းလိုက်ပါတော့မယ်။ တမန်တော်မြတ်ကဇနီး(၆၁)ယောက်ယူထားတယ်ဆိုပြီး နာမည်တွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီနာမည်အားလုံးကို မွတ်စလင်မ်တွေတောင်မကြားဖူးပါ။ တွေ့ကရာစာအုပ်ရဲ့နာမည်တွေ လျှောက်ရေးထားပြီး အထောက်အထားဆိုပြီး ပြပြန်တယ်။ အဲ့ဒီနာမည်တွေထဲက အချို့နာမည်တွေကို ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ သူတို့တွေက တမန်တော်မြတ်ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့ ဇနီးမယားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခင်ပွန်းတွေဟာစစ်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တမန်တော်မြတ်က ကျန်ရစ်သူဇနီးမယားများ သားသမီးများကို နေရာ တစ်ခုပေးပြီး သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကို အစိုးရအဖွဲ့က အထောက်အပံ့ပေးစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ စာရင်းကိုဘာမှန်း ညာမှန်းမသိပဲ တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဇနီးတွေပါလို့စွပ်စွဲလိုက်တာကတော့ သားသမီးချင်း မိဘမောင်နှမချင်းမစာနာ မထောက်ထား တတ်တဲ့ လူယုတ်မာတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်လုံးကဘွားကနဲပေါ်လာပါတယ်။ ဒီလိုလူယုတ်မာတစ်ယောက်ရဲ့ ဒီလိုအောက်တန်းကျ တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားအကျိုးပြုအင်တာနက်လောကကို အကျည်းတန်၊ အရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။ အင်တာနက်ရဲ့ အကျိုးရှိမှုကို လူတွေကြောက်လန့်ပြီးအဆုံးမပြုရဲအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုံ့ဆော်ဖျက်ဆီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။
Posted: 24 Feb 2013 01:01 AM PST
Baginda bertitah demikian dalam Wacana Perpaduan Ummah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada 19 Februari lepas bertajuk "Perpaduan ummah; harapan, realiti dan cabaran". Harakahdaily diberikan ucapan penuh baginda. Ia akan disiarkan selepas ini.
Posted: 24 Feb 2013 06:52 AM PST
I've never written anything about Nik Aziz Nik Mat, the Kelantan Mentri Besar and 'tok guru' among PAS followers. The reason being, I had respected him as an ulama.
I used to fancy his methods of wooing supporters during his early days asapolitician and Mentri Besar. He even won respect from many Malays outside PAS.
However, that good feeling and impression about him fizzled out after the began to issue one fatwa after another, some of which made him 'sit next to God'! He makes PASa'party of God', thus turning its followers intoabunch of fanatically dangerous lot.
They see heaven in Nik Aziz, especially after his stinging statement that those who join PAS would go straight to heaven when they die, which I liken it to how the late Iranian leader Ayatollah Ruhollah Khomeini brainwashed his soldiers who fought against Iraq during the 1980-1986 Gulf War.
I was there onafew occasions to observe and report the war. Excerpt from my book 'A Journalist at War' soon to be published:
"InsideaPOW camp in Basrah, I was given about an hour to talk toafew Iranian soldiers. I met 16 of them, still clad in their full Iranian uniform, their spirit running high, not deterred by the thought that they might die and rot there... "No. We are not scared. Our great leader Imam Khomeini will guarantee us the Jannah (heaven) if we kill more Sunni Muslims... the world must embrace our Shiite way of life..."
Six months after Khomeini died on June 3, 1989, I had the chance to visit his tomb in Behesti Zahrah near Qom. It was actuallyamercy flight to send medical supply for the earthquake victims in Iran, aboardaTUDM C-130. With me wereafew journalist and Deputy Home Minister Abdullah Fadil Che Wan who led the mission.
Khomeini was still very much 'alive' then. All Shiite visiting his tomb - housed inabig mosque-typed golden building, will pray facing his grave, irrespective of where they stand. His tomb was their 'qiblat'.
I remember Nik Aziz's words that those with PAS are better than the Muslims in Umno. When he issuedafatwa thatanon-PAS imam cannot leadaprayer, the Malaysian Muslim, majority of them are Sunni, broke apart, leading to some mosques conducting prayers, including Friday prayer twice - led byaPAS and non-PAS imams.
I am not so piousaperson but my basic and little knowledge on Islam is based on moderate teachings - that all Muslim are brothers, hence they must remain united and help each other.
But Nik Aziz, the most popular so-called ulama of an Islamic party and the oldest in the country, has actually shamed Islam by making irrelevant statements and stand on many issues, including hudud, aurat, women and politics.
His latest burst by labeling those who took the BR1M as chickens or fowls, really made Malaysians disheartened. Truly he reflected himself asa'sour politician' rather thanalearned Muslim given his shallow, bias and politically motivated mind in looking at the government's aid to rakyat to ease their burden.
Nik Aziz, head of the ulama who was even respected by some Umno grass roots and leaders, has now lost all credibility and respect when he shot his mouth without any basis of Islamic considerations.
What Najib is doing is just not cash aid of RM500 but also other aid such as aid for school going children, college and varsities students and many more, with the objective to lessen burdens. He obviously does not know how many of those would vote for the ruling BN coalition but he intention is clear…helping out the rakyat asaresponsible government.
So Nik Aziz should not, by any account misjudge or pass out remarks that does not reflect the attitude of 'bersyukur' or grateful to ALLAH for opening up Najib's heart and mind to share the country's wealth directly with the rakyat that lessens their financial burden.
Aaaa-hhh, Tok Guru... he is getting too old!
Posted: 23 Feb 2013 08:17 PM PST
၁၉၈၂ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု(၉)မျိုးကို ခေါ်ယူအကြောင်းကြားခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲတိုင်းရင်းသား လူမျိုး(၁၄၄)မျိုးကနေ (၁၃၅)မျိုးဆိုပြီးဦးနေ၀င်းက အာဏာရှင်စနစ်နဲ့လျှော့ချခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ဗမာ-မူဆလင်တွေဟာ လူမျိုးအမည်က ဘာမှန်း မသိဖြစ်နေတယ်။
အခုဆိုရင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဘန်ကီမွန်းတွေ့တယ်။နောက် ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာနမ်ဘီးယားနှင့် နေပြည်တော်မှာတွေ့ပြီးအခုကောက်ယူမယ့် သန်းကောင်စာရင်းဟာနိုင်ငံတကာစံနှုန်း
တွေနှင့် ညီရမယ်လို့ စာချွန်တော်ထိုးပြီးပြီ။ အဲဒီထဲမှာလူမျိုးတိုင်း
လူမျိုးတိုင်းသည်သူ့ရဲ့လူမျိုးစုအမည်အမှန်ကိုသမိုင်းဝင်၊ပြန်တမ်းဝင် ပြန်ဖော်ထုတ်တဲ့ အခါမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်လိုတဲ့သဘောပါ " ဟု ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃။
ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဆောက်ရေးကွန်ယက်( Peace Cultivation
Network – PCN ) ၏ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲနှင့် အလှူပေး အပ်ပွဲအခမ်းအနားကို တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် ယနေ့ ညနေ
(၃း၃၀)မှ (၅း၁၀)နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
ဒေသအသီးသီးတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်
သော ငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးသို့မဟုတ် ပဋိပက္ခများဟန့် တားဖြေရှင်းရေးအစီအစဉ်များဖော်ဆောင်ရေး၊ ဘေးရန်သင့်
ဒေသများတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ဆောင်
ရွက်ရေး စသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်ရေး ကွက်ယက်(Peace Cultivation Network –PCN)ကို(၁-၂-
၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင်(၅၀)ဦးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း
၊မြန်မာ-မွတ်ဆလင်ကွန်ယက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးကို လိုလားသည့် သူများနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပါဝင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့
ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဥပဒေရေးရာ၊ ဘာသာရေး စသည့် လိုအပ်
သော ကဏ္ဍများအားလုံးတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ပါဝင်ကူညီရန် မူ
၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင် သန်းကောင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင်
ဟူသော PCN ၏ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါက်တာ
ြုမင့်သိန်း က -"ဒီမိုကရေ စီဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ လူဦးရေကို အခြခံပြီးအချိုးအစားလိုက်ခွဲဝေလေ့လာစေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ- မွန်ပြည်နယ်မှာ မွန်အစိုးရ သီးသန့်ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မွန်လူမျိူး
ခြောက်သောင်းရှိရင် မွန်ရေးရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် ရှိရမယ်။
ဒါပေမယ့် စာရင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြထားမှုမရှိ်တဲ့အတွက် မွန်ခြောက်သောင်းမရှိလို့ မွန်ရေးရာ ၀န်ကြီးတစ် ယောက်မရှိ
ပေါ်လာပါတယ်။ ၁၉၈၂ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်း
ဦးနေ၀င်းက အာဏာရှင်စနစ်နဲ့လျှော့ချခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ဗမာ-မူဆလင်တွေဟာ လူမျိုးအမည်က ဘာမှန်း မသိဖြစ်နေတယ်။ အခုဆိုရင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဘန်ကီမွန်းတွေ့တယ်။နောက် ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အ
တွင်းရေးမှူး ချုပ် မစ္စတာနမ်ဘီးယားနှင့် နေပြည်တော်မှာတွေ့ပြီး
လူမျိုးတိုင်းသည် သူ့ရဲ့လူမျိုးစုအမည်အမှန် ကို သမိုင်းဝင်၊
တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်လိုတဲ့သဘောပါ " ဟုရှင်းပြခဲ့ပါ
အခမ်းအနား အစ်ီအစဉ် ဒုတိယပိုင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းမှု တည်
ဆောက်ရေး ကွန်ယက်မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသောဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းတိုက်များနှင့်သံဃာတော်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘေးဒုက္ခ
ခံစားကြရသောရခိုင်လူမျိုးများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘေးဒုက္ခခံစားကြ
ရသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၊ ကချင်ဒေသ ဘေးဒုက္ခခံစား
နေကြရသော ပြည်သူများအတွက် ငွေသားနှင့် ဆန်၊ဆီ၊ဆား
အပါအ၀င် စုစုပေါင်းငွေကျပ် သိန်းငါးဆယ် တန်ဖိုးခန့်ကို လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
အေးချမ်းမွန်မှ The Myanma Age တွင်ရေးသားသည့် သတင်းအချက် အလက်ကို မူရင်းအတိုင်း မျဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Aung Tin shared Aye Chan Mon